အာသာပြေ ( အဒေါ် နဲ့ တူလေး ): June 2016
ဆရာမ ဒေါ်မြင့်ကြည် (သို့) မိထွေး ဆရာမ ဒေါ်မြင့်ကြည် သို့
ကျတော် ၁၀ တန်းဖြေပြီး အမေ နဲပိန်းဥ ပန်းဥ တောလည်ရှာထွက်ဖြစ်တယ် အတူပါလာတာက ကျန်တော့သူငယ်ချင်း ဖိုးထူး အိမ်မှာ အမြဲဝင်ထွက်သွားလာနေကျဖြစ်သလို ကျန်တော်အမေနဲ့ ဖိုးထူးအမေ နဲ့ကငယ်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေလဲဖြစ်သည် တဖက်ကမ်းကတောမှာ ယုခုအချိန် မှိုရှာနေကျဖြစ် ချောင်းကိုကူးပြီး လှေကိုသစ်မြစ်ဆုံမှာကပ်ရပ်ရင်း ကမ်းပေါ်အတက် ဖိုးထူးအတက်မှာခေါ်ပြီးရေထဲကျပါလေရော ခေါင်းဆောင့်မိသလို သစ်မြစ်ကပေါင်ရင်းပါဆောင့်ပြီး သတိလစ်သလိုဖြစ်သွားပြီး အမေကလက်မြန်လို့ လှေပေါါ်ကလှမ်းဆွဲထားတာ သူ့ကို ဆွဲတင် ကုန်းပေါ်ရောက်တော့ သတိမရသေးတာနဲ့ ရအောင်လုပ်ပေးပြီး သတိရလာမှသက်ပျင်းချမိကြတယ် ထိမိထားတာကြောင့်မထနိုင်သလို ရေစိုဝတ်တွေကြောင့်ဖျားမှာစိုးပြီး အမေက ချွတ်ပြီး ကျွန်တော့်ပုဆိုးနဲ့လဲခိုင်းတယ် အထဲမှာဘောင်းဘီတိုပါလို့အဆင်ပြေသေးတယ် ဖိုးထူးကိုချွတ်ရင်း ဒီကောင်လီးကို အမေသတိထားမိသွားတယ် ဂေါ်လီထည့်ထားတာမြင်သွားပြီး ဒီကောင်လေး ဘာတွေလုပ်ထားပြန်ပြီလဲ ဟုပြောသည် ဒီကောင်လီးကလဲ အတန်းထဲမှာ အရှည်ဆုံးဟုသတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသူ ဒါပေမဲ အလုံးသေးလို့ ဆဂ်ါလီထည့်ထားရသည် အမေကကြည့်ရင်း လူနဲ့မလိုက်ဘူး ရှည်တာဟုရွေတ်ပြန်သည် ကလေးမဟုတ်တော့ဘူး မင်းတို့ အတက်ကောင်းတွေတက်နေပြီ မခင်မြကိုပြန်တိုင်ရမယ် ဟုပြောသည် ကျွန်တော်က စားဖို့ချက်ပြုတ်ရင်း အလုပ်များနေသည် ထိုအချိန် ဖိုးထူးနိုးလာပြီး ရေတောင်းသောက်သည် ကျမလဲ ကလေးကိုပွေ့ပြီး အသာပါးစပ်ထဲရေထည့်ပေးသည် သည်သလိုဖြစ်ပြီး ရေကပုဆိုးပေါ်ကျကုန်သည် စိုကုန်ပါပြီဟုပြောရင်း လက်နဲ့ပုဆိုးကိုသုတ်တော့မှ ပေါင်ကြားထဲမှာတောင်ထနေတဲ့ လီးကြီးကိုစမ်းမိသွားသည် ဟဲ့ ဟုဆိုမိရင်း ဖိုးထူးကိုငုံကြည့်မိသည် မင်းတို့နော် ငါ မင်းအမေကိုတိုင်ပြောမယ်ဟု ပြောလိုက်သည် ဘာကိုလဲအန်တီလို့ပြန်မေးတော့ မင်းတို့ကလေးတွေ ကိုယ်လုပ်တာကိုယ်သိပေါ့ ခုနပုဆိုးလဲတုန်းက မင်းဘာလုပ်ထားလဲအန်တီတွေ့တယ် အတက်ကောင်းတွေဘယ်ကတက်နေလဲ လူကငယ်ငယ်နဲ့ သဘာဝထက်ထူးချင်နေတယ် ဟုပြောသည် မသိသလိုနဲ့ ဘာကိုလဲဟုမေးတော့ မင်းဟာမှာဂေါ်လီထည့်ထားတယ်မလား ဘယ်သူလုပ်ပေးတာလဲ ဟုမေးသည် မင်းအမေကို တိုင်မယ်ဟုပြောတော့ အဖေလဲ ၂ လုံးထည့်ထားတယ် အမေက ဘာမှမပြောဘူး ဟုပြန်ပြောသည် အမလေး မခင်မြ ဘယ်လိုနေမလဲလို့တွေးမိသည် အဲ့ဒါနဲ့မင်းကလိုက်ထည့်တယ်လား ဟုမေးတော့ ကိုမြက ပြောလို့ပါ လီးသေးရင်ဂေါ်လီထည့်မှတဲ့ အဲ့ဒါကြောင့်ဟုဖြေလိုက်သည် အန်တီသားပဲမထည့်တာဟုပြောလိုက်သည် ကိုမြမထည့်ပေးလို့လေ သူ့ဟာက ကြီးတာတအားဖြစ်နေလို့ ကိုမြတောင်အံသြတယ် ဟုပြောသည် ဒေါ်အေးဝင်း သားတော်မောင်ကို လှမ်းကြည့်မိသည် အဝေးမှာ အလုပ်ရှုပ်နေသည် စိတ်ထဲဂေါ်လီပါတဲ့လီးကိုမြင်ဖူးချင်နေမိသည် ခုနက သားတော်မောင်ရှိနေလို့ သေချာမကြည့်ဖြစ် ခက်နေတာက ဒီကောင်လေးကလဲ မိမိသားအရွယ်လေး အကြံရတာနဲ့ မင်းခုနကျတုန်းက ဆောင့်မိသေးတာဘယ်လိုနေလဲ ဟုမေးတော့ ဒီနားအောင့်တုန်းဟုဖြေသည် ပြစမ်းကြည့်ရအောင်လို့ပြောပြီး ပုဆိုးစကို အသာဆွဲဖြေလိုက်သည် ဟို အန်တီလို့ အသံထွက်ပမဲ့ ပုဆိုးကကျွတ်သွားသည် ၆ ခွဲကျော်လောက်လီးကြီးထောင်နေတာမြင်ရသည် ဂေါ်လီကပြူးထွက်နေသည် မင်းအဖေက ၂ လုံးတောင်ဟုတ်လား ကြောက်စရာကြီးဟုပြောမိသည် အန်တီသားကမှ တကယ်ထွားတာ ဒီကောင်ပြောတော့ ငါကအဖေတူတာကွတဲ့ ဟုပြောသည်ဟုပြောသည် မယုံလို့ဘယ်လိုသိလဲလို့မေးတော့ အန်တီက ဦးလေးကို အမြဲစုတ်ပေးတာ သူချောင်းဖူးတယ်တဲ့ ညတိုင်းအန်တီ တို့ကိုဆချာင်းတယ်ပြောတယ် ဒီလိုကြားတော့ ဒီကောင်လေးမလွယ်ဘူး ဟုတွးမိသည် လင်ပါသားပေမဲ့ သားအရင်းလိုသဘောထားပြီး နေခဲ့သည် ကိုမြမောင်က တုတ်တုတ်ပေမဲ့တိုသည် မင်းဟာကလဲရှည်လိုက်တာ ဟုအမှတ်မထင်ပြောမိသည် တဆက်ထဲ မင်းအမေကိုတိုင်ရမယ် ငါတို့ကိုချောင်းစရာလား ဟုပြောတော့ အန်တီသားနဲ့လောင်းကြတာပါ ပြောတုန်းသားထလာတာမြင်တော့ မင်းပုဆိုးပြန်ဝတ်ဟုပြောပြီး အသာပြန်အုပ်ပေးလိုက်သည် အနားလာတဲ့ ထူးမောင်ကို သား ဘာလို့လဲ လို့မေးလိုက်သည် ညအတွက် ထင်းနဲနဲလိုမလားလို့ ပါ လိုက်ကောက်မလို့ မေမေ့ကိုလာပြောတာ ထမင်းအိုးတော့ကျက်ပြီ ဟုပြောသည် ချွေးတွေစိုပြီးအသားပျော့ဘောင်းဘီအောက်က ဖိုးဇော်လီးကိုမျက်လုံးကရောက်သွားသည် အရင်ကအတူနေပေမဲ့ သားရင်းတစ်ယောက်လို အခုတော့ သူမတို့လိုးးးတာကိုချောင်းနေမှန်းသိလိုက်ရသည် မေမေ ကူမယ်လေလို့ပြောရင်း ထရပ်လိုက်သည် ကုန်းလိုက်တော့မှ ရှေ့အင်္ကျအဟိုက်ကနေ နို့ ကြီးနှလုံးကိုမြင်လိုက်ရသည် အမေ နဲ့ ရွယ်တူပေမဲ ဒါကအမေမဟုတ် နေတာအေးဆေးပြီး တည်တည်ကြည်ကြည်ရှိပေမဲ့ ညဘက်အဖေနဲ့ လိုးကြတဲ့အခါ အတော်ထန်မှန်းသိထားသည် သူမှာ သားတစ်ယောက်ရှိပေမဲ့ အတူလာမနေ မိမိ ငယ်စဉ်က အိမ်တွင်းအောင်းပေမဲ့ အိမ်ထောင်မကျခင်အထိ ယောက်င်္ကျား ၄ ယောက်နဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည် ညီမယောက်င်္ကျားဖြစ်သူက မိမိကိုပါ အချိန်ရတာနဲ့ လိုးနေကျဖြစ်သည် ပြီး အဖေ့အကိုကလဲ လိုးသည် တစ်ရက် မောင်ဖြစ်သူမူးလာပြီး သူ့မိန်းမနဲ့ မှားပြီးလိုးတာခံရပြန်သည် ဒီလိုနဲ့စုံခဲ့ရသည်
အန်တီသားဟာက သူ့အဖေထက်ကြီးတယ်ကျနော်ထက်လဲရှည်တယ် အလုံးကလဲသူ့အဖေထက်ပိုတုတ်တယ်
ဟု ဖိုးထူးပြောလိုက်သည် မင်းမပိုမပြောနဲ့ အန်တီမြင်ဖူးတာ အန်တီသားဟာက သေးသေးပါပဲ တအိမ်ထဲအတူနေတာ သိတာပေါ့ ဟုပြောတော့ ဖိုးထူး မှ အန်တီသားက လီးသူခိုး ကျနော်တောင် သူဂေါ်လီထည့်ဖို့လုပ်တုန်းကမှသိတာ သူလီးတောင်တာ အဲ့တခါပဲမြင်ဖူးတယ် အဲ့ဒါကြောင့်သိတာ ကိုမြက သူလီးကြီးလို့ ဂေါ်လီမထည့်ပေးတာ ဒီကောင်က တအားထည့်ချင်နေတာ အန်တီသား အထွန်းလဲ ကိုမြထည့်ပေးတာပဲ ဟု ဖိုးထူးမှ ပြောပြလိုက်သည် ဒေါ်မြင့်ကြည် သူ့သားအကြောင်းကြားလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်သွားမိသည် မိမိသားက ဖိုးထူးတို့ ထူးမောင်တို့နဲ့ရွယ်တူ ဖြစ်သည် အနေအေးအေးနဲ့ အပျော်အပါး သိပ်ဝါသနာမပါ အြသားဖြူဖြူ နဲ့ အရပ်မြင့်သည် အခုဖိုးထူးအဖေနဲ့ အိမ်ထောင်မကျခင်အထိ အတူနေလာခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့် သားအကြောင်းကောင်းကောင်းသိသလို သားဖြစ်သူရဲ့ လီးကိုလဲ မြင်ဖူးပြီးသားဖြစ်သည် တိုတိုတုတ်တုတ် ဖြစ်သည်သားဖြစ်သူက အအိပ်ကြမ်းသည် အမြဲ အိပ်ယာထချိန်ဆို ပုဆိုးက ခါးမှာမရှိတာများသည် အခု ဖိုးထူးပြောပုံအရ ထူးမောင်လဲ သူ့အဖေတူတာဖြစ်မည်လို့ထင်မိသည် မင်းတို့က လူတွေကသာကလေးအရွယ်တွေ ဟိုတွေက မြင်တောမမြင်ဝံလောက်အောင်ပါလား ဟုပြောရင်း ဖိုးထူးကိုကြည့်လိုက်သည် ဒီကလေး အခုထိ လီးကတောင်နေတုန်း ဟဲ့ ဖိုးထူး မင်းဟာကြီးကို အုပ်ထားလေ သားပြန်လာလို့မြင်သွားရင် ငါပါမကောင်းဘူး ဟုပြောရင်းဟန့်လိုက်သည် ဒီလိုနဲ့အတွေးက အရင်အချိန်တွေဆီပြန်ရောက်မိသည် သားအဖေဆုံးကာစက သားနဲ့ အတူ အဖေါ်အဖြစ်အိပ်ပေးဖြစ်သည် မိမိကအရင်နိုးနေကျဆိုတော့ သားတော်မောင်ရဲ့ လီးကို မြင်တွေ့နေကျဖြစ်သလို သူ့အဖေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း လီးနဲ့ဝေးနေရတာ ၁နှစ်ကျော်ဆိုတော့ အာသာဆန္ဒအရှိန်တက်နေမိပေမဲ့ လီးနဲ့ဝေးနေခဲ့ရသည် မနေ့က ကျောင်းမှာ မောင်စိုးတို့ အောစာအုပ်ခိုးဖတ်တာ သူတွေ့ပြီး သူတို့စာအုပ်တွေသိမ်းယူခဲ့သည် အစက ကာတွန်းခိုးဖတ်တာဟုသာထင်ပြီး ဆူငေါက်ရင်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ အိမ်ရောက်မှ ခြင်းထဲက ပစ္စည်းတွေထုတ်ရင်း စာအုပ်လှန်ကြည့်ဖြစ်မှ အောစာအုပ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတာဖြစ်သည် စုစုပေါင်း ၃ အုပ် ရုပ်ပြက ၂ အုပ် ဖြစ်ပြီး ကာမဝတ္တု ပေါင်းချုပ် ဆိုသည့် အောစာအုပ်အထူကြီးတအုပ်ဖြစ်သည် ဆရာမတစ်ယောက်လို အေးအေးတည်တည်နေတက်ပေမဲ့ လီးဆိုတာမြင်တာနဲ့ အလိုးခံချင်စိတ်က မိမိရဲ့ တဏှာရာဂကို မိမိသိပြီးဖြစ်သည် အထက်တန်းကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆရာမဒေါ်မြင့်ကြည်ရဲ့ အိုးကလိုးချင်စရာကြီးကွာဆိုတဲ့ အသံမျိုးကြားနေကျဖြစ်သည် ဒေါ်မြင့်ကြည်ကိုယ်တိုင်လဲ မိမိဖာသာ သိသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေ့ပြီး အောစာအုပ်ဖတ်ရင်း ဆန္ဒတွေတက်နေမိသည် အိမ်ရှေ့ စားပွဲမှာထိုင်ရင်း ရုပ်ပြထဲက လိုးနေ လီးစုတ်ပေးနေတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး လက်တဖက်က မိမိစောက်ဖုတ်ကို ကလိပေးနေမိသည် အားမရတာနဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပါချွတ်ကာ ကျောင်းစိမ်းထမိန်ကို အောက်လျောချရင်း ခြေတဖက်ဘေးခုံပေါ်တင်ကာ ပေါင်ကားပြီး စောက်မွေးထူထူနဲ့ အဖုတ်ကို ကလိရင်း ကာမဆန္ဒဖြေနေမိသည်
တဖြေးဖြေး အရှိန်ရလာကာ စောက်ခေါင်းသံပါမြည်လာပြီး စောက်ရည်ဖြူဖြူတွေက စီးကျကာ လက်တခုလုံးသာမက ခုံမှာပါ အရည်တွေစိုနေပြီး ပြီးခါနီးပင်ဖြစ်နေပြီ ထိုအချိန်အမှတ်မထင် တခါးပွင့်လာပြီး သားတော်မောင်ဖြစ်သူ အထွန်းကိုမြင်လိုက်ရသည် သားဖြစ်သူရဲ့ မိမိကိုကြည့်ပြီး အထစ်ထစ်နဲ့ ဟို ဟို အမေ ဟုခေါ်လိုက်တဲ့အသံနဲ့ သားဖြစ်သူရဲ့ မျက်နှာကို အခုထိမမေ့သေး ရှက်သည့်စိတ်က မွန်ထူသွားသလို ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားခဲ့ရသည် လုပ်လက်စကိုရပ်ပြီး သားကလဲ အသံမပေးဘာမပေးဝင်လာတယ် အမေက အဝတ်လဲမလို့လုပ်နေတာဟု သားးကိုမကြည့်ပဲပြောလိုက်သည် အထွန်းကိုကြည့်တော့ သားမျက်လုံးတွေက မိမိရဲ့စောက်မွေးထူထူ တွေဆီမှာရောက်နေတာမြင်ရသည် အထွန်းလဲ အမေဖြစ်သူကိုမြင်လိုက်ရတော့ အံသြမိသည် သားအမိအတူနေ အတူအိပ်ပေမဲ့ တခါမှ အမေ့ကိုခုလိုမမြင်ဖူး အမေလဲ ဘာမှမပြောတော့ပဲ အနောက်ဖက်ဝင်သွားတာမြင်လိုက်ရသည် ထမိန်မပါတဲ့ အမေ့ရဲ့ ဖင်အိုးကြီးက အတော်ပင်တောင့်ကာ တင်းကားနေသည် ထမိန်ကိုကုန်းပြီးကောက်ခါမှ နောက်ဖက်သို့ စောက်ဖုတ်ကြီးက ပြူးထွက်လာပြန်သည် သူလဲအခန်းထဲဝင်ကာ ကျောင်းဝတ်စုံလဲလိုက်သည် ပုဆိုးချွတ်ရင်းမှသတိထားမိတာက မိမိရဲ့လီးကတောင်နေတာကိုဖြစ်သည် အမေဖြစ်သူပေမဲ့ လီးကသိပုံမရ အမေဖြစ်သူ ရဲ့ဖြစ်နေတာကိုပြန်တွေးမိပြီး တမျိုးခံစားမိသည် အိပ်ရှေ့အရောက် စားပွဲပေါ်ဖွင့်လျက် အောစာအုပ်ကိုမြင်လိုက်မိသည် အမေ အောစာအုပ်ဖတ်ရင်း ကလိနေမှန်းသေချာသွားသည် သူလဲ စာအုပ်ကိုယူကာဖတ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပြီး ဖတ်နေမိသည် ဇာတ်လမ်းကအတော်ကောင်းသလို ပုံတွေကအသက်ဝင်လှသည် လီးကပါတောင်လာမိပြီး ဂွင်းထုရန်အိမ်သာကိုပါပြေးလိုက်ရသေးသည် အပြင်မသွားဖြစ်တော့ပဲ စာအုပ်ဖတ်နေလိုက်သည်
ထမင်းစားတော့ သား မျက်နှာကိုပင် သေချာမကြည့်ဖြစ် ရှက်နေမိသည် အဲ့ညက သားဖြစ်သူရဲ့ပုဆိုးမပါတဲ့ အောက်ပိုင်းကိုမြင်တော့ သားဖြစ်သူရဲ့လီးကို သေချာကြည့်မိသည် တိုတိုနဲ့ တုတ်တုတ်ဖြစ်သလို ထိပ်ကမလန်ပဲ အရေခွံက အုပ်နေသည် လီးကတောင်နေတာဖြစ်သည် သူ့အဖေအလုံးလောက်ပေမဲ့ သူ့အဖေထက်တိုသည် လက်က အလိုလို လီးကိုလှမ်းကိုင်မိသည် အသာပင်အရေခွံကိုလှန်ကြည့်တော့ ဒစ်နီနီကပြူးထွက်လာသည် လက်ကမရပ်မိပဲ အထက်အောက်ခပ်ဖြေးဖြေးလှုပ်ပေးနေမိသည် မကြာလိုက် လရည်တွေ ပစ်ဆိုပန်းထွက်လာတာမြင်ရပြီး မိမိကိုယ်ပါစင်ကုန်သည် အဲ့တော့မှသတိဝင်သလိုဖြစ်မိသည် ဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကိုယ့်သားကို ဂွင်းထုပေးနေမိမှန်းမသိတော့ သားကိုကြည့်တော့ အိပ်ပျော်နေသည် သိပုံမရ တော်သေးသည် မိမိဖာသာ ရှက်မိသည် သား ကိုသေချာကြည့တော့ တရူးရူးနဲ့အိပ်နေတာ သေချာသည် တဆက်ထဲ လီးထိပ်မှာ လရည်ဖြူပြစ်ပြစ်အနှစ်တွေက ထပ်စိမ့်ထွက်လာပြန်သည် ညမီးရောင်မှာ သားရဲ့ ထိုးထောင်ထနေတဲ့ လီးတံကြီး နဲ့ လရည်ပြစ်ပြစ်အနှစ်တွေက မိမိကို ငြို့ငင်ဆွဲဆောင်နေသလားဟုပင်ထင်မှတ်မိသည် စိတ်ထဲဝေခွဲမရစိတ်တွေနဲ့အတူ ဆန္ဒအာသီသက ပျင်းပြစွာ တောင့်တနေပြန်သေးသည် အိပ်နေသည့် သား မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်မိပြန်သည် သက်ပြင်းတခုအသာကြိတ်ချလိုက်ရင်း နောက်တကြိမ် သား မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်ရင်း အိပ်နေတာမှန်းသေချာလောက်သည်ဟုထင်သည် အိပ်နေတာပဲ မသိလောက်ပါဘူး ဟု ကိုယ့်ဖာသာ တွေးရင်း တောင့်တနေသည့် သွေးသားဆန္ဒကို အလိုလိုက်ပြစ်လိုက်သည် မစဉ်းစားနေတော့ပဲ မိမိ နဲ့ သားဖြစ်သူ ၂ ယောက်ထဲသာရှိသည့် အခန်းထဲမှာ ထိုင်နေရာမှ သားရဲ့ လီး ကို အသာငုံပြီး မိမိပါးစပ်နဲ့ လရည်တွေစီးကျပေနေတဲ့ ထိပ်ဖူးနီနီကို လျှာနဲ့ အသာပွတ်သတ်ရင်း အတွင်းမှလရည်တချို့ကိုအသာစုတ်ယူနေမိသည် ပါးစပ်ထဲပြည့်နေသည့် သားရဲ့ လီးကိုပြန်ထုတ်ဖို့ အားမရှိသလို ဖြင့် အာသာငမ်းငမ်း စုတ်ပေးနေမိသည် လီးကလဲ ပိုပြီးမာထောင်ထနေသည်ဟုပင်ထင်ရလောက်သည် သေချာအနီးကပ်စုတ်မှ သားရဲ့လီး လဲ အဖေထက်ပင်အလုံးပိုတုတ်မှန်းသိလိုက်ပြီး တချက်ချင်းအထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးနေမိတဲ့ လီး တံကြီးမှလရည်တွေပန်းထွက်လာပြန်သည် သားဖြစ်သူဆီမှ အင်း အင်းးးးး ဆိုသည့် အသံမသိမသာထွက်လာရင်း လရည်အချို့က မိမိပါးစပ်ထဲဝင်လာတော့သည် ခုနကထွက်ထားတာတောင်မကြာသေး အခုလရည်က ပါးစပ်မပြည့်ရုံထွက်လာနိုင်သေးသည် လရည်တွေကိုမျိုချရင်း သားရဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်တော့ ငြိမ်သက်စွာအိပ်ပျော်နေတုန်း ခုလောက်ထိအိပ်ပုတ် တဲ့သားဟုတွေးရင်းပြုံးမိသည် ခုညအဖြစ်ကို အိမ်မက်လိုပင်ထင်မိသည် ခုအသက်အရွယ်ထိ မည်သူမှ မသိသေး မိမိတစ်ဦးထဲသာ သိသည့်ကိစ္စဖြစ်သည် တခြားလူလဲသိလို့မဖြစ် ဒီလောက်နဲ့ကျေနပ်ပြီး စာအုပ်ဆက်ဖတ်ကာ မိမိဖာသာ ပြီးဆုံ့းအောင်ပြုလုပ်ပြီး ထိုညကို ကျေကျေနပ်နပ်ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးသည်
ဆက်ရန် အပိုင်း ၂ သို့
မသိလို့ပါ သူငယ်ချင်း ၂
အခန်းကြမ်းမှစိုနေတာတွေ ကို အဝတ်တခုနဲ့လိုက်တိုက်ပေးနေတဲ့ အန်တီရဲ့နောက်ဖက်ကနေ ကုန်းလိုက်ကြွ လာလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ဖင်လုံးကြီးကိုမြင်ပြီး လီးက တောင်လာပြန်သည် အသက်ကြီးပေမဲ့ ဖင်လုံးကြီးက အုံကောင်းကောင်းနဲ့ ရှိနေတုန်း တဆက်ထဲပေါင်လုံးတုတ်တုတ် နဲ့ အောက်ပိုင်းတောင့်သလို အပေါ်ပိုင်းကလဲ နို့ထွားထွား ခါးတုတ်ပေမဲ့ ဗိုက်တအားပူမနေ စိတ်နဲ့မှန်းပြီး အတော်လိုးကောင်မှာလို့ တွေးနေမိသည် ပုံစံက အမေ့ပုံစံကိုလုံးမျိုး အမေလဲ အဲ့ဒါကြောင့်မုဆိုးမပေမဲ့ ယူမယ့်သူ့ချက်ချင်းတွေ့ပြီး အခုလို နောက်အိမ်ထောင်ထပ်ပြုထားတာဖြစ်လောက်သည် ဟဲ့ သား ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ လူကိုကြည့်ပြီး ဟု လှမ်းမေးလိုက်တဲ့ စကားသံကြားမှ သတိပြန်ဝင်လာပြီး အော် ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး အန်တီကိုယ်လုံးနဲ့ ကျတော်အမေ ကိုယ်လုံး ဘယ်သူပိုတောင့်လောက်မလဲလို့တွေးမိလို့ ငေးမိသလိုဖြစ်သွားတာ ဟုပါးစပ်ထဲလာရာဖြေလိုက်သည် သားအမေက အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ဟုပြန်မေးရာ မေမေက ၄၀ ကျော်ပြီ ခုဆို ၄၅ နှစ် ဟုပြောရင်း အန်တီ ကရောဟုမေးတော့ ၄၆ ဟုဖြေသည် သားအမေထက် ၁ နှစ်ကြီးတာပေါ့ ဆိုတော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြမိသည် အမေကအညာဘက်ကဆိုတော့ အသားနဲနဲညိုသည် ဒီအန်တီက မေမေထက်အသားပိုဖြူသည် စကားပြတ်သွားတော့မှ ထိုင်ပါအုံး အန်တီ ဘယ်လိုလဲ ညနေကကိစ္စ အဆင်ပြေလား လို့းမေးလိုက်တော့မှ အဲ့ဒါလာပြောတာ ပိုက်ဆ့လဲပြန်လာပေးထားတာ ခုရက်ကစီမံချက်ရှိတော့ ပိုက်ဆံရလဲမလုပ်ချင်ကြဘူး ဟုပြောသည် ကျတော်လဲ အန်တီ ဒါ ဝိုင် သောက်ကြည့်ပါလား သူငယ်ချင်းပေးလိုက်တာ ကျတော်ကမကြိူက်ဖူး ဟုပြောရင်း ဝိုင်တခွက် ကမ်းပေးလိုက်သည် ကြားဖူးပေမဲ့ မသောက်ဖူးပါဘူး ဘာအတွက်သောက်တာလဲလို့မေးသည် လူကြီးတွေ ကျန်းမာရေးကောင်းတယ် အိပ်ရေးဝတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ အန်တီ လို့ဖြေတော့ ဒါဆိုသောက်ကြည့်တာပေါ့ ဆိုပြီး ခွက်ကို ဆေးလို့ထင်လားမသိ တချက်ထဲ အကုန်မော့ ပြစ်လိုက်သည် ပြောမလို့လုပ်ပြီးမှမပြောပဲ နောက်ထပ်ဖြည့်ပေးထားလိုက်သည် ညနေက တခြားအန်တီတစ်ယောက်က ပြောတော့ အန်တီမရရအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဆို သေချာအောင်ကျတော်က ၅ သောင်းပေးခဲ့တာ ပုမှန် ၂ သောင်းဆိုလို့ ၂ ဆပေးတာ ကျန်တီ အန်တီအတွက် အကျိးဆောင်ခသဘောမျိုး အန်တီကပဲပြောသေးတယ်ေ ရကိုရစေရမယ်ဆိုပြီး ခုဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကျတော်တမင်နဲနဲရစ်ပြစ်လိုက်သည် ဝိုင်သောက်တာ ၃ ခွက်ဆိုတော့ စကားပြောတာဆိုတာပိုသွက်နေတာသတိထားမိသည် မင်းတို့အရွယ်တွေ အဲ့ဒါပဲ လုပ်ဖို့ စိတ်ပါကြလား လူကငယ်ငယ်ရှိသေးတယ် သားအမေ သိရင် ဘယ်လိုနေမလဲ ဟုမေးသည် အမေ က သူ့ယောက်င်္ကျားရှိတယ် ကျတော်ကမိန်းမမရသေးလို့ အဲ့ဒါကိုတခါတလ လုပ်တာ အဲ့သဘောပဲ ဟုဖြေလိုက်သည် ရောဂါရပါတယ်သားရယ် ဟုပြောသည် ဒါဆို ဘာလုပ်ရမှာလဲ မေးရင်း မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည် အို သားတို့ကောင်လေးတွေ ကိုယ့်ဖာသာလုပ်ကြတာရှိတယ်မလား အဲ့လိုပဲလုပ်ပေါ့ ဟုဖြေသည် ၁၂ နှစ်သားထဲက အဲ့လိုလုပ်လာတာ မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး တခြားတယောက်ကလုပ်ပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ လို့ပြောလိုက်သည် အိမ်ထောင်ကျမှ နောက်တစ်ယောက်လုပ်ပေးတာရမယ်လေ ခုလိုလူပျို ရည်းစားမရှိဘာမရှိဘယ်သူကလုပ်ပေးမတုန်းကဲပြော ဟု ဆိုသည် မူးလာတော့ အပြောအဆိုပါရဲလာတာသတိထားမိသည် မလေးရှား တို့ အင်ဒို တို့ အမေတွေဗိုက်မှာ ဝင်စားတာမှ ပိုကောင်းမလားထင်မိတယ် လို့ပြောတော့ ဘာဖြစ်လို့တုန်းလို့ပြန်မေးသည် သူတို့က သားဆိုတအားဂရုစိုက်တယ် အရွယ်ရတာနဲ့ရှင်ပြုတယ်ဆိုပြီး ထိပ်ဖြတ်ပေးကြတယ် လို့ပြောတော့ အင်း ကြားဖူးတယ်လေ ဒါတော့ ဟုပြောသည် တချို့ကဘာညာကြောင့်ဆိုပြီးသာပြောနေကြတာ အမှန်ကဘာကြောင့်ဖြတ်လဲဆိုတာ အလုပ်အတူလုပ်ဖူးတဲ့ အင်ဒို အဒေါ်ပြောလို့ သိရတာ နောက်တခြား ရင်းနှီးတဲ့သူမေးလဲ အင်း လို့ထောက်ခံကြတယ် ဘာလို့ဖတ်တာလဲ ပြောပါအုံးဟုမေးသည် ဒီလိုအန်တီရာ ဒါက လီး ဆိုပါတော့ လို့ပြောရင်း လက်ဖြင့်နမူနာပြသည် ဒီလီးထိပ်မှာ အုပ်နေတဲ့အရေပြားရှိတယ်မလား အဲ့ဒါကို ဖြတ်ပြစ်လိုက်တာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သဘောကပိတ်တာကိုဖွင့်ပေးသလိုပေါ့ ပိုထွားလာတယ်ပိုရှည်လာမယ် ဒစ်ဂေါင်းက ပိုကြီးပြီး ထိတာကွတ်တာအလေ့အကျင့်ဖြစ်နေအောင် ဆိုတာမျိုးတွေကြောင့်တဲ့ သူတို့အမေတွေ သူတို့ သားတွေကိုတကယ်ဂရုစိုက်တယ် ကျတော်က တအားရသ်းနှီးလို့သိရတာ မပြောပြကြဘူး သားကဘယ်လိုသိတာတုန်း အန်တီတို့လဲ သားကိုဂရုမစိုက်ပဲမနေပါဘူး ဟုပြန်ပြောသည် ဂရုစိုက်တာမတူတာကိုပြောတာပါ လက်တွေ့လဲ ကြုံဖူးလို့ပြောတာ ဟုဆိုတော့ ဘာဂရုစိုက်တာလဲပြောပါအုံးဟုဆိုသည် ဒါဆိုအန်တီကိုမေးမယ် အမှန်အတိုင်းတော့ဖြေရမယ် ဖြစ်မလားဆိုတော့ ဖြစ်တယ် လူကြီးဖြစ်တဲ့ အန်တီက ကိုယ့်သားအရွယ်လေးကို လိမ်ပါ့မလား သားအသက် နဲ့ အန်တီသား အတူတူပါပဲ သားမှတ်ပုံတင်မှာတွှေုလို့ ဟုပြောသည် ကျတော်ကိုပြောပြတဲ့ အင်ဒိုကောင်က သူကမလေးနိုင်ငံသားပဲ သူ့အမေက မွေးပြီး ဆုံးသွားလို့ မလေး မကမွေးစားလိုက်တာ ဖြစ်ပုံက သူ့အမေက မလေးရှားမှာ အိမ်ဖော်လုပ်တာ အဲ့မှာ အိမ်ရှင် ကအလကားလိုးလိုးနေရင်း ဗိုက်ကြီးပြီး ရတဲ့ကောင် သူ့ကိုအိမ်ရှင်ကမွေးစားလိုက်တာ အမေအရင်းကိုပေးမသိဘူး ကလေးထိန်းမိန်းမလိုပဲ ကောင်လေးလေးကိုအသိပေးထားတယ် ဘာဆိုင်လဲအဲ့ဒါနဲ့ ပိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့က ဟုဆိုလာသည် ပြောပြမယ် အိမ်ရှင်မလေးမက တကသိုလ်လက်ထောက်ကထိက ယောက်င်္ကျားလဲဝန်ထမ်းပဲ သမီးတစ်ယောက်ထဲရှိလို့ သားလိုချင်နေတာတဲ့ သူ့အမေညီမကလဲတူတူလုပ်တာ သူ့အဒေါ်ပေါ့ အဲလိုနဲ့ကြီးလာတာ အဲ့ကောင်ကလဲ ဝါသနာပါတော့ ပြောဆိုဖြစ်လို့သိရတာ ဘာသိရတာလဲ လို့မေးပြန်သည် အဲ့ကောင်လေးက သူ့အမေကို အိမ်အကူ ကလေးထိန်းလို့ပဲထင်နေတသူ့ကို အိမ်ရှင်ကမွေးစားထားတာ အိမ်ရှင်မလေးမက သူ့သားအဖြစ်တရားဝင်မွေးစားတာ အဲ့ကောင်လေးက ၁၀ နှစ်လောက်မှာကျောင်းဆက်မတက်တော့ပဲ အိမ်ရှင်မလေးမက အိမ်မှာပဲ လိုလေသေးမရှိထားပေးတယ် ဒါပေမဲ့ လူမျိုးတူတဲ့ ကလေးထိန်းအိမ်အကူလို့သိထားတဲ့ သူ့အမေနဲ့ အနေပိုနီးတယ် အိမ်ရှင်မလေးမရဲ့တူ တစ်ယောက်က တခါတခါအိမ်လာတက်တယ် ဟိုအင်ဒိုအိမ်အကူကိုမြင်တော့ မလေးကောင်တွေထုံးစံအတိုင်း လီးသောင်းကျန်းဖို့ အဲ့အင်ဒိုကောင်နဲ့တိုင်ပင်တယ် တရက် အဲ့ကောင်ကစီစဉ်ပေးလို့ သူ့အမေကို မလေးကောင်က လိုးဖြစ်သွားရော လိုးပြီးပြန်သွားတော့ ဟိုကောင်လိုးတာမြင်ထားတော့ သူလဲမနေနိုင်ပဲ ဝင်လိုးပါရောတဲ့ သူ့အမေက မလိုးဖို့ပြောပေမဲ့ မရတာနဲ့ အလိုးခံလိုက်ရတယ် ဒီကောင်က ငယ်ပေမဲ့ လီးက အင်ဒိုမတွေအကြိုက်ဆိုဒ်ဆိုတော့ သူ့အမေလဲ သားမှန်းသိပေမဲ့ မငြင်းဘူး ၄ ခါလောက်ကိုလိုးလိုက်တယ်ပြောတယ်
ဟယ် တော့ …… မအေ ကလဲ ကွယ် ကိုယ့်သား အရင်း နဲ့မှကွယ်
ကလေးကမသိလို့ထားပါတော့ ဟု အန်တီက ဝင်ပြောသည်
နောက်ပိုင်း အမြဲလိုးဖြစ်တယ်ပြောတယ် ဒါကို အိမ်ရှင်မလေးမက သိတော့ သူ့အမေကို အလုပ်မလုပ်ဖို့ ပြောပြီး ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်
နောက်ပိုင်း အိမ်ရှင်မနဲ့အဲ့ကောင် လိုးဖြစ်သေးတယ်တဲ့ အမှန်က မလေးမက တမင်မွေးစားပြီး လိုးခိုင်းထားတာ မလေးမတွေ တဏှာကြီးတာ မြန်မာတွေမမှီဘူး အင်ဒို မလေး ဖိလစ်ပိုင် အရမ်းတဏှာကြီးတယ် ကျတော်တို့မြန်မာတခုသာတာက မြန်မာလီးက သူတို့ထက်ကြီးတယ် ရှည်တယ် အန်တီလဲ သားရှိတာပဲသိမှာပေါ့ဟု ပြောရင်း ဝိုင်ငှဲ့လိုက်သည် အန်တီကြည့်ရတာ စိတ်ထလာနေပုံရသည် တခုမေးမယ် ရမလားဟု ပြောလိုက်သည် ဘာမေးမှာလဲ မေးလေ သိတာဆိုဖြေမယ် ဟုဆိုသည်
စမေးမယ်အန်တီ မှန်မှန်တော့ဖြေနော် လို့ပြောရင်း ဝိုင်ခွက်ကမ်းပေးလိုက်သည် အင်း စိတ်ချ မေးချင်တာမေး အကုန်ဖြေမယ် လို့ မူးးဝေပြီးဖြေတာမြင်တော့ မူးနေပြီမှန်းသိလိုက်သည် အန်တီ သား ရဲ့ လီးကကြီးလားသေးလား မြင်ဖူးလား ကြီးစေချင်လား သေးစေချင်လား အရင်ဖြေပြ ဟုပြောလိုက်သည် မညာနဲ့နော်လို့ထပ်ပြောလိုက်သေးသည်
သူ့အဖေလောက်ပါပဲ အလုံးတော့ပိုထွားတယ် အန်တီဘယ်လိုသိလဲ အန်တီသားက အမေ ကို သားလီး ကဘယ်လိုဆိုပြီးပြောပြတာလား ဟုဆိုတော့ သားကပြပါ့မလား အဲ့လိုတော့ ဟုပြောပြန်သည် ဒါဆို အန်တီက တခုခုချောင်းမြင်ဖူးထားလို့သိရတာပေါ့ ဟုတ်လားဟုမေးလိုက်သည် မဖြေ ဘယ်တုန်းကချောင်းလို့မြင်တာလဲ ဝိုင်ခွက်ကိုအကုန်ငှဲ့ထည့်ပြီးမော့ချလိုက်တာတွှေုရသည် သူ့ဖာသာလက်နဲ့ လုပ်နေတုန်း မြင်ဖူးထားတာ ချောင်းကြည့်တာမဟုတ်ရပါဘူးကွယ် သားက လက်နဲ့ လူပျိုပေါက်ထဲကလုပ်နေတာ ကိုယ့်သားပဲ တအိမ်ထဲနေတာ သိတာပေါ့ ဟုဆိုသည် ဒါဆိုအန်တီနဲ့တူတာဖြစ်မယ် အမေ တဏှာစိတ်များရင် သားတဏှာစိတ်များတယ် အဖေ တဏှာစိတ်များရင် သမီးတဏှာစိတ်များတယ် လို့ဆေးပညာမှာဖတ်ဖူးတယ် အောင်မယ် မင်းက အန်တီကိုပါဆွဲထည့်နေတာပေါ့
ဒါဆိုမင်းကျတော့ရော မပြောခြင်ဘူး ဟုဆိုသည် အပေါ့သွားအုံးမယ် ဆိုကာ ထပြီး ရေချိုးခန်းဘက်ဝင်လိုက်သည် အပေါ့သွားပြီး ပြန်အထွက်ရေပုံးကိုတိုက်ကာ ချော်လဲပါတော့သည် ဗုံး ဒုန်း ဆိုတဲ့အသံကြောင့် အန်တီလဲပြေးဝင်လာကာ ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီးရောက်လာသည် လဲကျတော့ ခေါင်းမထိအောင် လက်ထောက်ထိန်းမိတော့ လက်ခေါက်ပြီး အတော်နာသွားသည် အန်တီကတွဲပြီးထူပေးကာ ကုတင်ဆီပို့ပေးသည် အန်တီလဲ မူးနေပုံရသည် သူပါယိုင်နေသည် အန်တီကိုယ်လုံးဖက်မိတော့ စိတ်ကကြွလာမိသည် ပိုနာဟန်ဆောင်ရင်း အသာအိပ်ယာပေါ်မှေးထိုင်လိုက်သည် ကြည့် အကုန်စိုနေပါ့လား အအေးမိကုန်မယ်
အဝတ်လဲပြီးမှအိပ် ဟုဆိုသည် အသာခေါင်းညိပ်ရင်းပက်လက်လှန်ချလိုက်သည် အော် အဝတ်လဲပါဆို မှ ဟုပြောရင်း
သူ့ကိုကြည့်သည် လက်ကအတော်နာသွားလား ဆိုတော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်
အဝတ်လဲပြီးမှအိပ် ဘယ်မှာလဲပြော ယူပေးမယ် ဟုဆိုလာသည် ဘေးနားကအိတ်ကို ပြတော့ ထသွားပြီး ဖွင်လျက် ပုဆိုးမပါဘူးလားဟုမေးသည် မပါဘူး ဘောင်းဘီတိုရှိတယ် ပြောလို့မဆုံး အင်္ကျတစ်ထည် နဲ့ ဘောင်းဘီတိုတစုံကိုင်လာပြီး ဘေးနားချပေးသည် လဲထားလိုက် ဟုပြောသည် ကျေးဇူးပါအန်တီ အခုလိုဖြစ်တော့ အမေ့ကို သတိရမိတယ် အမေဆို ကျတော်မလေးရှားမသွားခင်အထိ အဝတ်ကအစ သူဝတ်ပေးနေကျ ခုလိုတခုခုဖြစ်လဲ အရမ်းကရုစိုက်တယ် ကဲအန်တီလဲပြန်အိပ်တော့လေ အဝတ်မလဲတော့ပါဘူး လက်ကတအားနာနေတယ် ခြောက်သွားမှာပါဟု ပြောလိုက်သည်
အန်တိသာ အမေ ဆို ကျတော်ကို သူကိုယ်တိုင်လဲပေးမှာ ဟု မသိမသာ စကားစလိုက်သည်
မလဲလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ ဒီလောက်စိုနေတာ ကဲလာဝိုင်းကူပေးမယ် ဆိုပြီး အကျီင်္ကို အသာချွတ်ပြီး လဲဝတ်ပေးသည် ပြီးနောက် ဘောင်းဘီကိုယ့်ဖာသာလဲလို့ရမလားလို့မေးသည် အန်တီသားကိုတောင် မလုပ်ပေးဖူးဘူး ဆိုလာသည် ကျတော်လဲသားအရွယ်ပဲမဟုတ်ဘူးလား ဟုမေးရင်း ကြည့်လိုက်သည် ကဲပါ ချွတ်ဆိုကာ ဘောင်းဘီကို အသာဆွဲချလိုက်သည် အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်က တင်းနေတဲ့ အခွေကြီး ကို မြင်ပြီး အန်တီစိုက်ကြည့်နေတာမြင်ရသည် ဆက်ပြီးအတွင်းခံကိုဆွဲတော့အရင်ဆုံးဆီးစပ်မွေးတွေပေါ်လာပြီး ခပ်ပျော့ခွေနေတဲ့ လီး ကြီးကဖျက်ဆိုခုံထွက်လာသည် အို ကွယ် ဟုအသံထွက်ပြီး လီးကိုကြည့်နေတာတွေ့ရသည် ကျတော့်လီးက မတောင်လျင် တကယ့်ကိုသေးနေပြီး စိတ်နဲနဲပါလာမှ သာမန်အနေသို့ရှိလာတက်သည် ခုမတောင်သေးချိန် အရှည်က ၅ လက်မကျော်ရှိပြီး ဖီးဆင့်စက်ဘီးလက်ကိုင်လုံးလောက်သာရှိနေတက်သည် ဟယ် မင်းဟာ ကြီးက ကလေးမှမဟုတ်တာ ဟုပြောသည်
အန်တီကလဲ ပုံမှန်ပါပဲ ဟုဆိုလိုက်သည် ဒါလားပုံမှန် ဟုဆိုသည် အန်တီကလဲ မမြင်ဖူးတာကြနေတာပဲဟုဆိုတော့ မင်းအမေ က မင်းဟာကိုမြင်တာဘာမှမပြောဘူးလား လို့မေးသည် ပြောတယ် ဟုဆိုတော့ ဘာပြောလဲလို့ပြန်မေးသည် အဖေထက် သားတစ်လက်မရှည် တယ် လို့ပြောတယ် လို့ပြောတော့ ဟုတ်လဲဟုတ်မှာပေါ့ လူက ကလေးသာသာနဲ့ နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး ဟုဆိုသည် အန်တီကိုကြည့်ရတာ စိတ်ထန်နေပြီမှန်းသိလိုက်သည် တောင်လာရင် ဘယ်လောက်ရှိမယ်ထင်လဲဟုမေးလိုက်သည် ဘယ်သိမလဲဟုဆိုသည် အန်တီယောက်ကျား နဲ့သားက ဒါလောက်မရှိဘူးလား လို့မေးတော့ ခုမှဒါလောက်ဟာမြင်ဖူးတာ
တကယ်လဲ မိမိအခုလိုဟာကို ခုမှမြင်ဖူးတာဖြစ်သည် အိမ်ထောင်မကျခင် ရည်းစားဘဝ နဲ့ ယောက်င်္ကျားလေး အချို့နဲ့ အလိုးခံဖူးသည်
အကြီးဆုံးလို့ထင်သည် ကိုမင်းဒင်နဲ့အိမ်ထောင်ကျခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ မိမိလင်တောင်နေလျင်တောင်မှ ဒီထက်မဆိုသလောက်ငယ်သေးမည်
ခုဒီကလေးက လင်တော်မောင်ထက်သာနေသည် တောင်များတောင်လျင် ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲမသိသေး ကျတော်လီးတောင်ပြမယ်ကြည့်မလား အန်တီဟုမေးလိုက်သည် မေးတာရိုင်းသလိုဖြစ်ပေမဲ့ မိန်းမတွေအကြောင်းသိထားသဖြင့် တည့်ပင်မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် အောင်မယ် ငါ မင်းအမေအရွယ်လောက်ရှိတယ် ဒီလိုမေးစရာလား
မင်း အမေ ကို မင်းအဲ့လို သားလီးတောင်ပြမယ် ကြည့်မလားလို့ မေးကြည့် ပါးထမရိုက်ရင်ကံကောင်းမှတ် ဟုပြန်ပြောသည် ခုလိုပြောဆိုနေပေမဲ့ လက်ကလီးကိုဆွပေးနေသဖြင့် လီးက တဖြေးဖြေးတင်းမာတုတ်ခိုင်ပြီး မာတောင်လာသည် အကြောတင်းထနေပြီး ဒစ်လုံးကပင် အတော်ထွားထွက်လာသည် အရင်းပိုင်းပိုတုတ်လာပြီး အရှည် ၇ လက်မကျော်လောက်ဖြစ်လာသည် လုံးပတ်က လက်နိုပ်ဓါတ်မီးခန့်ရှိလာတာမြင်တော့ နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး သား ဟာကြီးက
ဟုဆိုသည် လက်တဖက်ကို အသာဆွဲပြီးလီးကိုကိုင်ခိုင်းတော့ အစပိုင်းရုန်းပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမထိတထိကိုင်ရင်း ဂွင်းထုသလိုလျောတိုက်ပေးနေသည် စိတ်ထဲအလိုးခံချင်စိတ်က အလိုလိုဖြစ်နေမိသည် ဂွင်းထုပေးရင်းစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သည်မသိ လီးကို အသာကုန်းပြီးစုတ်ပေးလိုက်မိသည် ပါးစပ်ပင်မဆံ အတော်လေးကြာကြာစုတ်ပေးလိုက်မှ အား အန်တီ သား ပြီးတော့မယ် ဆိုပြီး မကြာလိုက် လရည်တွေ ပါးစပ်ထဲပန်းထည့်လိုက်မိသည် အင်း ဆိုပျို့သံကြားရပြီး လီးကိုထိုးသွင်းထားတော့ လရည်တွေမျိုချနေပုံရသည် လီးကိုအတင်းတွန်းထုတ်မှ လက်ကျန်လရည်က ပစ်ဆိုကန်ထွက်လာကာ မျက်နှာပေါ်စင်ကုန်သည် နောက်လက်နဲ့ ကိုင်ရင်းအသာထပ်ညစ်တော့ ထပ်ပန်းထွက်ကာဆံပင်ပေါ်အထိလရည်ပြစ်ခဲခဲတွေ စင်ကုန်သည် လီးငုံစုတ်နေရာမှ ခေါင်းထောင်လိုက်ရင်း ကျတော့်ကိုကြည့်ကာ ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲမသိတော့ပါဘူး ရွေတ်နေသည်
သားဖြစ်တဲ့သူက မအေဖြစ်သူရဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ကင်မရာကိုဆင်ထားပြီး အမေဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အဝတ်မပါတဲ့ ခန္ခာကို မြင်တွေ့နိုင်ဖို့အတွက်လို့ ဆိုပါတယ်
အမေဖြစ်သူကလဲ အသက်ကြီးပေမဲ့ မပျက်စီးသေးပါဘူး
အဒေါ် ဆိုတာ အမေ မှ မဟုတ်တာ
ရေးမယ်စိတ်ကူးလိုက် အချိန်မအားလိုက် တခြားကိစ္စတွေကပေါ်လာလိုက်နဲ့ ခုမှရေးဖြစ်တယ် ဆိုရပါမယ်
* * * ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တာက ဒီလိုရေးတာ ပြောတာဟာ လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေကို စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ
ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်မိဘ ဆရာ နဲ့ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသူတွေကို စော်ကားထိခိုက်စေလိုတဲ့စိတ်မျိုး မရှိကြပါဘူး * * * ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ပြင်ပမှာ ခုကျနော်ရေးပြမဲ့ အခြေအနေပုံစံအဖြစ်အပျက်တွေက
တကယ်ကို လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတာ ငြင်းဖို့ခက်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်
ဒါကြောင့် ပွင့်ပွင်းလင်းလင်း ရေးသားတာမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်
* * * ဒါမျိုးက အပြောတော့လွယ်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းလက်တွေ့ ဘယ်လောက် ခက်တယ်ဆိုတာ တွေ့ကြုံဖူးခဲ့ရင် သိနိုင်သလို ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကပေးတဲ့
* * * အခုဒီပိုစ့်အမည်လေးကို ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ရှင်းပြစရာမလိုလောက်အောင်ရှင်းပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းစဉ် အဓိပါယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် * * * အရင်ဆုံး ဒီလိုကိစ္စတွေကို ဘယ်သူကမှ အထူးတလယ်သင်ကြားပြသတာ သင်ယူတာမျိုး ဘယ်မိန်းမ/ယောက်င်္ကျား မှမရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ကြုံတဲ့အခါ
* * * ဘာကြောင့်ပါသလဲ ? * * *
* * * ဖြေကြည့်ပါ မိမိဖာသာ ___ __________________++++++++++++
* * * ဒီလို လိင်ကိစ္စတွေ စတင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အသက်အရွယ်ဟာ
အဲ့လိုအချိန် အသက်အရွယ်မှာ လိင်ကိစ္စ လက်တွေ့ပြုလုပ်ဖူးသူဆိုတာ အနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပါတယ် အရင်ဆုံး အချင်းချင်းပြောဆိုတာကစလို့ အပြာစာအုပ်ဖတ် အပြာကားကြည့် ရာကစလို့ မိမိဖာသာ masturbation ပြုလုပ်အစပြု လို့ မိမိရဲ့ ကာမဆန္ဒကို မိမိဖာသာဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုးဖြင့်သာ စတင်ဖူးသူများပါလိမ့်မယ်
ကျောင်းသားဘဝအရွယ် ဘယ်ဆရာမ ဖင်ကြီးကတော့ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ဘယ်ဆရာမနို့က ဘယ်လိုထွားထွားကြီး စသဖြင့် ပြောဆိုဖူးကြမှာပါ အဲ့အသက်အပိုင်းအခြားမှာက ကိုယ့်ရှေ့မှာ အမှတ်မထင် အကျီင်္လည်ဟိုက်ကတဆင့် ရင်သားလေးမြင်လိုက်ရယုံနဲ့ လီးတောင်တဲ့အထိဖြစ်ကြဖူးတဲ့ သူမရှိပါဘူးဆိုပြီး ဘယ်သူငြင်းပါမည်လဲ * * * ဘယ်အသက်အရွယ် ဖြစ်စေ ဘယ်လို မိန်းမ /ယောက်င်္ကျား တိုင်းကမှ ငါကတော့ ဘယ်လိုအတိုင်းအတာအထိ ရမ္မက်ကာမပျင်းပြတာမျိုး ရှိကြောင်း မပြောကြပါဘူး သာမန်လောက်သာ ပြောဆိုကြသူအဖြစ်သာရှိပါတယ် အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေ က ယောက်င်္ကျားလေးတွေထက် ပိုပြီး ဟန်ဆောင် စိတ်မပါဝင်စားဟန်ရှိတက်ကြပါတယ် '' masturbation မပြုလုပ်ဖူးသူမရှိပါ '' လို့ အနောက်တိုင်းဆေးပညာ ဆွေးနွေးခန်း /အမေး အဖြေ မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်
* * * အပေါ်မှာရေးခဲ့ တာတွေက ခုရေးနေတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုရဲ့ လိုရင်းကို ရည်ညွှန်းနိုင်ဖို့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ငယ်စဉ်ကစလို့ ကိုယ့်နဲ့အတူနေ မိသားစုအိမ်မှာ အမျိုးသမီးအနေဖြင့် အဖွား အမေ အဒေါ် အမ စသဖြင့် တစ်ဦးမက တစ်ဦးနဲ့အတူနီးကပ်စွာကြီးပျင်းလာဖူးသူ များပါတယ်ကလေးအရွယ်က အဖွား အမေ အဒေါ် တွေနဲ့ အတူတူအိပ် ခဲ့ကြချိန်မှာ ကလေးစိတ်ရှိစဉ်ကမသိသာပေမဲ့ အရွယ်ရောက်အချိန်တန်လာတာနဲ့ သွေးသားဆန္ဒ အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲလာတာကြောင့် မိမိစိတ်ကမသိပေမဲ့ မိမိသွေးသားဆန္ဒက မိမိရဲ့ လိင်စိတ် သို့ လိင်အင်္ဂါ ကအချက်ပြလာတက်ကြပါတယ် ဆိုလိုသည်က သွေးသားအပြောင်းအလဲ သဘာဝအလျောက်ဖြစ်လာတာမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ သိတက်မြင်တက် ထားဖူးပြီးဖြစ်သည့် စိတ်ကြောင့် လိင်အဂါနိုးထလာတက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်
* * * တချို့တွေကပြောကြပါလိမ့်မယ် "ကိုယ့်အမေအရွယ်ကြီးကွာ မလုပ်သင့်ပါဘူး "
ကျနော်လဲ တခြားကောင်တွေကို အဲ့သလိုပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ကျနော်ပြည်ပရောက်ပြီး မှကြုံတဲ့ အဖြစ်တခုကြောင့် တချိန်က ကျနော်အမြင်မသင့်တော်လို့ ဝင်ပြောခဲ့ဖူးတဲ #ကိုယ့်အမေအရွယ်ကြီးကွာ မလုပ်သင့်ပါဘူး # ဆိုတဲ့ စကားကိုယ်တိုင်အပြောခံခဲ့ရဖူးပါတယ် ]
နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်း သိလာရတာက တကယ်တမ်း အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေပဲ
တကယ်တမ်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှေ့မှာရှိနေလို့သာ ကိုယ့်သိက္ခာအတွက် ထိန်းသိမ်းပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာပါ ကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ဆန္ဒရမက်ဖြစ်ဖို့ က အသက်အရွယ် နဲ့မဆိုင်ပါဘူး အဲ့လို ကာမစိတ်ကြောင့် တဏှာရာဂ ပျင်းပြစိတ်ဝင်စားတာ အသက် ၂၀ အောက်အထိသာလို့ မသတ်မှတ်ထားသလို စိတ်ပါ ဝင်စားတဲ့အချိန်ကစလို့ အဖိုး အဖွား ဖြစ်တဲ့အထိ အဲ့စိတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ငြင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ကိုယ့်အဒေါ် ဖြစ်လို့ ဆရာမ ဖြစ်လို့ ကိုယ့်အမေ ဖြစ်လို့ အဲ့လိုတဏှာစိတ်မရှိဘူးလို့ ဘယ်သူငြင်းနိုင်ပါမည်လဲ ကိုယ်တွေ အိမ်ထောင်မရှိခင် လီးသရမ်းသလို အိမ်ထောင်ကျပြီးသား မိန်းမတွေ အကြောင်းဖြင်း၎င်း အနေနီးအတူနေအလိုလိုက်မိတာကြောင့်၎င်း ဆန္ဒပြည့်ဝမှု့မရရှိတာမျိုးကြောင့်သော် ၎င်း လွန်ကဲတဲ့တဏှာစိတ်ကြောင့်သော်၎င်း ဖေါက်ပြန်ချင်စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲ လိုအပ်နေတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုအတွက် အလိုက်အထိုက်နေပြီး မိမိအတွက်ပြသနာမဖြစ်နိုင်မည့် အာသီသဆန္ဒဖြေဖျောက်ချင်စိတ်တခုကြောင့် မလိုတာတွေထည့်မတွေးပဲ လိုက်လျောပေးတဲ့မိန်းမမျိုးတွေရှိနေတာ တကယ့်လက်တွေ့ပါ တချို့တွေက ကိုယ့်နဲ့ပက်သက်မယ်ထင်ရင် မကောင်းတာမပြောချင်မရေးချင်ပါဘူး စိတ်ထဲမှာက အမျိုးထဲရှိတဲ့သူ အကုန်မှန်းဖူးကြမဲ့သူတွေပါ ကျနော် အိမ်မှာ ချောင်းပါတယ် ရေချိုးခန်း အိပ်ခန်း အဲ့လိုတွေ ကအစ ချောင်းတာပါ ပြောရရင် ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ချောင်းမှတော့ ကိုယ့်အမျိုး မိသားစုပဲရှိမယ်ဆိုတာ ရှင်းပြဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး
အဲ့တော့ နောက်ဆုံး တစ်ခုမေးချင်တယ်
တကယ်လို့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူကို သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ လိုး ခွင့်ရခဲ့မယ် ဆိုရင် ကိုယ့်အဒေါ်မလို့ မလိုးပဲနေမှာလား
ဒါမှမဟုတ် အဒေါ်လဲ လိုး မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လိုးပစ် မှာလား
(ဒီပုံက အဒေါ်ကို တူအရင်း ကလိုးတာဖြစ်ပြီး ကင်မရာခိုးတပ်ရိုက်ထားတာပါ)
(ဖေါက်ပြန်ကြတာမျိုးလဲရှိသလို လိုအပ်တာတခုကြောင့်အတွက်လဲ ဖြစ်နေကြတာပါ)????
အိမ် မှာ စုစုပေါင်းမှ ၄ ဦးသာရှိသည် အဒေါ် ၂ ယောက် နဲ့ အဒေါ်သားရယ် ကျတော် ရယ်တခါတလေ လူပိုဆိုလို့ နေ့လယ်ပိုင်း အဝတ်လာလျော လိုအပ်တာလောက်လာဝိုင်းလုပ်ပေးတဲ့ ဘေးအိမ်က မမြင့်ကြည် ဆိုတဲ့ ဒေါ်လေးသူငယ်ချင်း ဖြစ်သူသာရှိသည် အဒေါ်ကြီးက ယောက်င်္ကျားရှိပေမဲ့ ဖားကန့်နယ်စပ်မှာအမြဲလိုနေပြီး အိမ်ကို ၁ နှစ်တခါလောက်သာပြန်လာသည် ဒေါ်လေးက သားတစ်ယောက် အမေမုဆိုးမဖြစ်သည် လင်ဖြစ်သူဆုံးသည်မှာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပေမဲ့ နောက်အိမ်ထောင်မပြုသေး ကလေးအမေဆိုပေမဲ့ ကိုယ်လုံးက တောင့်တင်းပြီး လမ်းထဲကသူတွေ မျက်စိအရသာခံတဲ့ ပုံစံမျိုး ရွာမှာဆိုရင် လုံးကြီးပေါက်လှလို့ခေါ်ရမည် ဝပေမဲ့ ကိုယ်လုံးက စည်ပိုင်းလိုမဟုတ် ဖင်လုံးထွားကားထွက်သလို နို့ထွားထွားကြီး ၂ လုံးက ကိုယ်လုံးနဲ့လိုက်ဖက်သည် အမေ့ အောက်ကဖြစ်ပြီး အမေက အလတ် ဖြစ်သည် ညီအမတွေကိုယ်လုံးက တပုံစံထဲ အမေက အဒေါ်တွေထက်အနဲငယ်တော့ပိန်သည် အဒေါ်တွေနဲ့ အနေဝေးတော့ ရောက်ခါစကစိမ်းသလိုပင်ဖြစ်မိသည် အဒေါ်ကြီးဖြစ်သူက သူနာပြုဆရာမဟောင်းဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးသူမိတ်ဆွေအဆက်အသွယ်နဲ့ အခုထိ နစ်မ သဘောမျိုး လူနာတာဝန်ယူစောင့်ပေးတာမျိုးပြုလုပ်သေးသည် ဒေါ်လေးက အရင်က ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး အလုပ်မှထွက်ထားသူဖြစ်သည် အိမ်ထောင်ကျနောက်ကျသလို လင်ဖြစ်သူနဲ့ ၃ နှစ်လောက်သာပေါင်းသင်းရပြီး မုဆိုးမအဖြစ်ရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်သည် ဒေါ်လေးယောက်င်္ကျားအမ ၂ ယေက်က ကျတော်တို့ရွာကဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးလဲအဆင်မပြေဟု သူတို့ပြောပြလိုသိခဲ့ရသည် ဒေါ်လေးကို အခေါ်အပြောမလုပ်ကြ ငါ့တို့က နင့် ကိုမလို့သာခင်ကြတာ နင့်အဒေါ်ကိုတော့ ရွာအဝင်မခံဘူး ငါ့မောင် သေတာ သူ့စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး နင့် ဒေါ်လေးကြောင့်ဟုပြောဖူးသည် ဘာကြောင့်ဆိုတာမေးကြည့်တော့ ငါ့ မောင် နှဖားကြိုးထိုးခံထိတာလေ သူလဲ ညားပြီးမှသိတာ နင့်အဒေါ်က ဖင်သရမ်းချင်သလိုသရမ်းပြီး ငါ့မောင် ကို အမိဖမ်းယူလိုက်တာ နင့်အဒေါ်ရုံးကိုရောက်တဲ့ငါ့မောင်ကံဆိုးတာ အရာရှိစုံနဲ့ ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကို နောက်မှသိရတယ် နင့်အဒေါ်က အကောင်ကြီးတွေကိုဖင်ပေးပြီး ချူစားနေတဲ့ကောင်မ နောက်ယူမလိုဖြစ်ပြီးမှ တဖက်ကနင့်အဒေါ်အကြောင်းသိပြီးထားခဲ့ချိန် ငါ့မောင်ကို နဖားထိုးခဲ့တာ ကလေးကိုတောင် ငါ့မောင့်က သူ့သားလို့ အသိအမှတ်မပြုဘူး ဒါတွေသိပြီး အဲ့စိတ်နဲ့သေရတာ ဟုပြောပြဖူးတာပြန်သတိရမိသည် အခု အသက် ၄၃ ရှိပေမဲ့ တောင့်ဖြောင့်တာက ကျတော်ပင် ရောက်ခါစက စိတနဲ့ပြစ်မှားနေမိသည် နောက်ဖက်ကနေဖင်လုံးကိုမြင်တာနဲ့ လီးတောင်လာသည် ပေါင်လုံးတုတ်တုတ်နဲ့ ဗိုက်က သိပ်မပူတော့ ကြည့်ရတာ တကယ်ကို အရသာရှိသည် ညတိုင်းဂွင်းမှန်းထုဖြစ်သည် တပတ်အကြာ သူ့သား ဘော်ဒါကခဏပြန်လာမှ ညီဝမ်းကွဲကိုမြင်ဖူးသည် ကျတော်နဲ့ရွယ်တူဖြစ်ပြီး ၁၀တန်းတက်နေတာဖြစ်သည် ၂ရက်နေပြီြးiပန်သွားသည် ဒေါ်လေးက သူ့သားပြန်ပြီးနောက်ပိုင်း ကျတော်ကို သား လို့ပြောင်းခေါ်လာသည် အစက ဖိုးထက် လို့ပဲခေါ်သည် ကျတော်လဲ သူ့သားခေါ်သလို မေမေမြင့် လို့လိုက်ခေါ်ရင်း အခု မေမေမြင်ပဲခေါ်ဖြစ်နေသည်
လမ်းထဲ ရပ်ကွက်ထဲက ကျတော်ဒီရောက်တော့ ဘာတော်လဲမေးကြသည် တမင်ပဲ မတော်ဘူးလို့ လိမ်ပြောထားလိုက်သည် ကျတော်ကိုက အကူရအောင် တမင်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့ ခြံထဲရှိတာ အကုန်ဝိုင်းလုပ်ပေးဖြစ်သည် ဒေါ်လေးက အိမ်ရှေ့မှာ ဗီဒီယိုခွေငှားဆိုင်ဖွင့်ထားသည် ညနေ ၆ နာရီလောက်ကနေ ည ၁၁ ကျော်လောက်ထိဖွင့်တာဖြစ်သည် ကျတော်က အခွေဆိုင်တော့ မကူဖူးသေး လမ်းထဲကကွမ်းယာဆိုင် က ဦးချစ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ဦးမျိုးတို့နဲ့ ခင်မင်တက်နေပြီဖြစ်သည် သူတို့ကတူမှန်းမသိကြပဲ အလုပ်သမားလို့ပဲထင်ပုံရပြီး ဒေါ်လေး အကြောင်း ပြောပြီး ကျတော်ကိုပါ မင်း သူဌေးမကို လိုးပြီးပြေးကွာ အဲ့မိန်းမက ငါ့တို့လိုတွေကို အထင်မကြီးဘူး ကား နဲ့ရာထူးသာရှိ အသေကုန်းတယ် အခုမှငြိမ်သွားတာ ဒီလောက်ကုန်းတာတောင် မကျဘူးကွာ ငါ့တို့မိန်းမတွေနဲ့ကွာပါ့ ဘာဆေးကောင်းရှိလဲမသိဘူး ဟုပြောသည် ဒီမယ် ကိုမျိုး ဆေးမဖြစ်နိုင်ဘူး ကျုပ်ညီမိန်းမ မြင့်ကြည်ကိုကြည့် ကလေးက ၄ ယောက်မွေးပြီးသား ကျုပ်ညီ ကားခေါက်ပြန်တိုင်းလဲ သူတို့လင်မယား အားအားရှိလိုးနေတာ ခုကြည့် ဘယ်မှာကျလာလို့လဲ ကျုပ်ညီတောင် လိုးမနိုင်တော့ဘူးပြောရတယ် ကျုပ်ခင်ဗျားမလို့ပြောတာနော် ဒီမယ် ကျုပ် မြင့်ကြည်မကို ၂ ခါလိုးဖူးတယ် ကောင်မငတော်ေ်ထန်တယ် မြင်ရတာပြောရတာ အေးသလိုနဲ့ အတော်ထန်တဲ့မိန်းမ ဒီကောင် သူဌေးမလဲ အဲ့လိုပဲဖြစ်မယ် လီးမြင်မှ စိတ်ဖေါက်တက်တာမျိုးဖြစ်မယ် ဟု စနောက်ပြောင်ပြောဖြစ်ကြသည် ဒေါ်လေးကို သူများပြောလို့သာကြားသိဖူးပေမဲ့ ဟုတ်ပါ့မလားလို့ထင်မိသည် ဘုရား တရားအမြဲလုပ်ပြီး အိမ်မှာ ကို့်အလုပ်နဲ့ကိုယ်အေးချမ်းစွာ နေတာမျိုးပဲတွေ့သည် မနေနိုင်ငြိမ်တာဖြစ်မယ် ဟုပြန်ပြောသည် ဦးမျိုးတို့က ဒေါ်လေးကို မေးရင် ဒေါ်လေး ကအေးဆေးပါဗျ ဟုပြောလိုက်သည် တရက် ကျတော်ဖုန်းကို ဒေါ်လေး ယူသုံးရင်း ဖုန်းထဲက အောကားတွေကို တွေ့သွားသည် သား မင်းလဲ စာမေးပဲခဏနား ရတုန်းတချိန်လုံးဖုန်း ကလိနေပြီးရင်မဟုတ်တဲ့ခွေအမြဲဌားကြည့်ကြတယ် ငယ်သေးလို့ပြောတာပါ သားကို နောက်အချိန်တန်ရင်မပူနဲ့ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ကြုံရမယ် လင်မယားကြည့်တာ ထားတော့ သားတို့အရွယ်တွေ ဒီလိုဟာတွေကြည့်ပြီးတော့ စိတ်ပါလာရင်ကြည့်ပြီး ဂွင်းပဲထုနေတော့တာ မလုပ်ရဘူးမပြောပါဘူး တခါတလေပေါ့ ခုတော့ တစ်နေ့ ၃ ခါလောက်ဆိုတော့ မကောင်းဘူး မြင့်ကြည်မ သားဆို တစ်နေ့ ၂ ခါလောက်လုပ်တယ်တဲ့ သူ့အမေပြောတယ် ကျေနပ်အောင်လွတ်ပေးထားတာတဲ့ ဒေါ်လေးက ကျတော်ကို ကြည့်ပြီး နှာဘူးထတာအရွယ်နဲ့မလိုက်ဘူးနော် မပြောလိုက်ချင်ဘူး ဖုန်းထဲကဇတ်လမ်းလမ်းတွေအကုန်လုံးက ဟွန်း နာမယ် လူကြီးတွေကို စိတ်နဲ့ပစ်မှားနေတာမလား အကုန်လုံး အမေတွေ အဒေါ်တွေအရွယ်တွေနဲ့ဇတ်လမ်းတွေကြီးပဲ ဟုပြောသည် ကျတော်လဲ ခုရက်ထဲ ဂွင်းပိုထုဖြစ်သည်
ဒေါ်လေး နဲ့အတူ သစ်ခွပင်ရေလောင်းတိုင်း လီးတောင်တာကို ထိန်းဖို့ အတွင်းခံဝတ်ပြီးမှသာ ရေလောင်းနေရသည် ရေလောင်းချိန်တိုင်းဒေါ်လေးက စွပ်ကျယ်ချိုင်းပြတ်ဝတ်တာများတော့ နို့ထွားကြီးကို အတိုင်းသားမြင်နေရသည် တချို့ ကြိုးပြည်နေတာမျိုးပြန်ချီတဲ့အခါ သူကရှေ့ကနေပန်းပင်ထိန်းပေးပြီး ဒေါ်လေးက နောက်ကနေလှမ်းချီတက်သည် ထိုအချိန်ဒေါ်လေးနို့က သူ့ကိုဖိပွတ်သလိုဖြစ်ရင်း အရသာခံနေမိသည် လီးက ဘောင်းဘီ၂ ထပ်ပေမဲ့ အရှေ့ဘက်ကဖေါင်းဖုထနေတာကို သတိထားမိလောက်အောင်အထဲကရုန်းထနေသည် ဒေါ်လေးပန်းပင်တွေစုပြီးကုန်းကောက်တဲ့အချိန် ထွက်ကျလာတဲ့နို့နှစ်လုံးကို သတိလွတ်ပြီးငေးနေတာကို မေမေမြင့်စေ ကျတော်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးရေပိုက်နဲ့လှမ်းပက်လိုက်သည် ရေကဘောင်းဘီကို စိုတော့ ပိုကပ်ပြီး ဖေါင်းထနေတဲ့ လိုင်းမျိုးက ထင်းနေအောင်ပေါ်လာသည် မေမေမြင့် လဲမြင်ပုံရသည် ဘာမှတော့မပြော သား ရေပိုက်သိမ်းပြီးရေချိုးလိုက်တော့ ဒီလောက်ဆိုရပြီ ဟုပြောသည် နေပူတာကလဲ မဖြူတဲ့အသားပိုမဲပါပြီ လို့ပြောပြီးွှေစက်တွေခါချနေသည် ခြေထောင်က ပေနေတာကို ရေကုန်းဆေးတော့ နောင်ကနေထိုင်ရင်းပိုက်သိမ်းနေတဲ့ကျတော် စိတ်မနည်းထိန်းထားရသည် လေးဘက်ကုန်းပေးထားသလိုဖြစ်နေတော့ နောက်ကနေတင်လိုးချင်စိတ်ပင်ဖြစ်မိသည် ဦးမျိုးပြောတာဟုတ်မည် မိန်းမတွေက ကြီလူထွားရင် သူတို့ အဖုတ်ကထွားတက်သလို လူညက်လို့လဲ မတော်ဘူးမရှိဘူး ယောက်င်္ကျးကပိုထူးတာက လီးအရွယ်က လူအရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး လူငယ်ပေမဲ့ လီးကြီး သလို လူထွားပေမဲ့ လီးပျောက်နေမျိုးရျိါ်ရှိတယ် မင်းသူဌေးမလို သဘာကြီးတွေပိုသိတာပေါ့ ချာတိတ်မတွေသာ လူထွားမှလီးထွားမယထင်နေကြတာ ဆိုတဲ့စကားသတိပြန်ရလိုက်သည် ဒေါ်မေမေမြင့်လဲ တူတော်မောင်ရဲ့ ဖေါင်းခုနေတာငို အမှတ်တမဲ့ သတထားမိရင်း အတော်ကြီး ထိုးခုနေပုံဆို လီးကထွားလို့သာဖြစ်မယ်လို့တွေးမိတော့ စိတ်ဝင်စားစွာ သိချင်စိတ်ဖြစ်မိသည် သူမကံက တခုခလိုတယ်လို့ပြောရမလိုတော့ရှိသည် အပျိုအရွယ်ကနေ ခုအသက်အရွယ်ထိ ၁၀ ယောက်မကဆက်ဆံခဲ့ဖူးသည် လီးတွေကပုံမှန်ရွယ်တူတွေကြီးဖြစ်သည် ရှ ၆ လက်မပင်မပြည့်ကျ အလုံးကလဲ ၃ မတ်လုံးသာသာမျတွေ လီးကြီးတာ video ထဲမှာသာတွေ့ဖူးတော့ မြု အလိုးလဲခံမိချင်သည် ဒေါ်မေမေမြင့်စိတ်ထဲ မရိုးမရွဖြစ်လာမိသည် ခုလီးနဲ့ဝေးနေတာကြာတော့ ပိုတောင့်တမိလာမိသည် အဝတ်တွေကို အခန်းထဲမဝင်တော့ပဲ အိမ်ဘေးရေကန်နားမှာလဲပြစ်လိုက်သည် တအားပူတယ်သား နေအေးမှချိုးမယ် အဝတ်စိုတွေလဲနေတာမြင်ရသည် ထူးထူးခြားခြား ထမိန်မဝတ်ပဲ သဘက်အကြီးတခုကို ကိုယ်လုံးမှာ ပတ်ထားတာမြင်ရသည်သဘက်က ကြီးပေမဲ့ ဒေါ်လေးက ကိုယ်လုံးထွားတော့ ရင်ဘက်နဲ့ တင်ပါးဖုံရုံသာအုပ်မိသည် ပေါင်လုံးဖွေးဖွေးတောင့်တောင့်ကိုမြင်နေရသည်i
အမေ နဲ့ ပထွေး (မလေး အစစ်)
အမေ နဲ့ ပထွေး
လိုင်းကောင်းတဲ့အခါ video ပါတင်ပေးပါမည် အမေ ကို သား ကခိုးရိုက်ထားတာပါ မလေးအဒေါ်ကြီးက မျက်နှာသိပ်မလှပေမဲ့ ကိုယ်လုံးကတော့ ကျတော်သာသူ့ သား ဖြစ်နေရင် လီး တစ်ကယ်တောင်မိမှာပါ
မသိလို့ပါ သူငယ်ချင်း ၁
( သူငယ်ချင်း အမေ )
ကျတော် လေယာဉ်လက်မှက်ကြောင့် မင်းမင်း တို့နဲ့ နေ့မတူပဲ တပတ်စောပြန်လာဖြစ်သည် အိမ်ကိုအံသြအောင်ကြိုမပြောထားကြ မလေးရှားမှာ ၂ နှစ်နေပြီး တလအလယ်ပြန်လာတာဖြစ်သည် ကျတော်က စကိုင်းဘက်ကဖြစ်ပြီး မင်းမင်းနဲ့ စိုးလေး တို့က မှောဘီနားမရောက်ခင်ရွာလို့သိထားသည် လိပ်စာမယူထားဖြစ် ဒီနှစ်ကောင်အညာလိုက်မယ်ဆိုလို့ လေယာဉ်ကဆင်းပြီး တန်းမပြန်ဖြစ်သေးပဲ တန်းခိုခန်းတခုကနေ စောင့်ဖို့ ကြိုပြောထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်သည် မင်း ထောက်ကြန့် လမ်းစုံမှာ တည်းခိုခန်းတွေရှိတယ် ဈေးသက်သာတယ် မင်းလိုချင်တာ ဘာညာလဲ စုံစမ်းဘို့ရတယ် လို့ မင်းမင်းပြောထားတာကြောင့် လမ်းစုံကို ကားစီးပြီး လမ်းဘေးတလျောက် တည်းခိုဖို့နေရာ လိုက်ကြည့်မိသည် ည ၈ နာရီခန့်ရှိပြီ မီးကမလာ ဘက်ထရီမီး မီးစက် တို့ဖြင့်လင်းနေတာဖြစ်သည် ရှေ့မှာ စားသောက်ဆိုင်နဲ့တွဲထားတဲ့တည်းခိုခန်းကို လှမ်းဝင်လိုက်သည် ကောင်တာလိုနေရာမှာ ဖုန်းတလုံးနဲ့ ထိုင်နေတဲ့ ဖွားတော်ကို အခန်းရမလားလို့မေးလိုက်သည် ဖွားတော်က တချက်မော့ကြည့်ပြီး နာရီပိုင်းလား တနေ့စာလာလို့မေးသည် အခန်းကြည့်လို့အဆင်ပြေရင် တပတ်နေဖြစ်မယ် အခန်းပြပေးလို့ရမလားလို့မေးလိုက်သည် အေးရတယ် သား လို့ပြောပြီး ရီရီ လို့လှမ်းခေါ်တာကြားရသည် ဒီကလေးကို အခန်းပြပေးပါကွယ် တပတ်နေမယ်ဆိုတော့ ပေါ်ဒေါင့်ခန်း မျိုးပြလိုက်လို့ ပြောပြီး သား လိုက်သွားကြည့် အဆင်မပြေတာပြော ဟုဆိုရှာသည် ကျတော်ကိုအခန်းပြဖို့ ရောက်လာတဲ့ ရီရီ ဆိုတဲ့ အန်တီကြီးကို တချက်ပြုံးပြရင်း အကဲခတ်လိုက်သည် အသက်တော့ကြီးပုံရသည် လှေကားတက်ရင်း နောက်ကဖင်လုံးကြီးကိုငေးမိသည် အိုးကတောင့်သလို ထွားထွားကြီး ခပ်ဝဝပေမဲ့ အလုံးအစိုင်တွေက သူဟာသူနေရာနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းနေသေးသည် ပေါင်လုံးတုတ်တုတ် ဆိုတော့စောက်ဖုတ်က ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ပုံဟုတွေးမိသည် နို့တွေကလဲ ထွားထွား တင်းတုတ်နေသည် ။
ရေချိုးပြီး အောက်ဆင်းခဲ့သည် ကောင်တာကဖွားတော်က ရှေ့ဆိုဖာမှာထိုင်နေသည် ခုနကသေချာမမြင်လိုက် ခုသေချာကြည့်မှ ဘွားတော်က အတော်လန်းသည် အိုးကလဲ ကော့တင်းနေတုန်း ပြင်ပြင်ဆင်နေတက်တော့ အရွယ်ပိုတင်ပုံရသည် ကျတော်ကိုမြင်တော့ အဆင်ပြေတယ်မလား ထိုင်လေဟုပြောသည် ဒီလိုနဲ့စကားပြောဖြစ်ကြပြီး သမီး တစ်ယောက် သားတစ်ယောက် နဲ့ မုဆိုးမဆိုတာသိလိုက်ရသည် အသက်က ၄၃ ဆိုတော့ အမေနဲ့သိပ်မကွာ ကလေးတွေကို ဘော်ဒါပို့ထားတော့ တယောက်ထဲလိုဖြစ်နေတာ မလို့ သူငယ်ချင်းလဲဖြစ်တဲ့ ရီရီ ကိုအတူခေါ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ကျတော်တခုခုဆင်းစားလိုက်အုံးမယ်လို့ပြောပြီး စားသောက်ဆိုင်ထဲဝuင်ခဲ့သည် ဘီယာ ၁ လုံးမှာ ရင်းစလိုက်တာ ၁၂ နာရီထိုးခါနီးးတော့ စားပွဲပေါ်မှာ ဘီယာက ၆ လုံးဖြစ်နေသလို လူလဲမူးနေပြီ စားဖို့ မှာရင်း စားပွဲထိုးလေးကို စကားစလိုက်သည် ညီလေး ဆော်လေးဘာလေး ခေါ်လို့ရလား ဟုမေးလိုက်သည် ကျတော်ကိုကြည့်ုပီး အကိုက ဘာလုပ်ချင်တာလဲ ညခေါ်အိပ်မှာလားဟုမေးသည် အင်းလို့ဖြေတော့ အကိုက အပေါ်မှာတည်းတာမလား ဒါဆို မန်နေဂျာ ကိုမျိုးကိုမေးလိုက် သူစီစဉ်ပေးလိမ့်မယ် ဟုပြောသည် ဟ တယ်ဟုတ်ပါလား အဆင်ပြေချင်တော့လဲဟုတွေးကာ မြန်မြန်စားသောက်ပြီးတက်လာခဲ့သည် အပေါ်ရောက်တော့ ညနေက အန်တီ၂ ယောက်လုံးထိုင်နေတာတွေ့ရသည်မူးနေတာကို အသာထိန်းရင်း မန်နေဂျာကိုမေးကြည့်လိုက်သည်နေ့လည်ထဲက ကိစ္စတခုကြောင့်ပြန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောသည် စိတမထဲ အတော် ညစ်သလိုဖြစ်သွားသည် ဘာလိုအပ်လို့လဲ ဟုမေးသည် ပြောမထွက် အားမနာပါနဲ့ ပြောပါ ဟုဆိုလာသည် မိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုချင်ကြောင်းပြောလိုက်သည် အဲ့ဒါတခု ခုရက်ပိုင်း နားနေကြတယ် စီမန်ချက်ရှိလို့ ဘယ်သူမှမလာရဲကြဘူးဟုပြောသည် ညနေထဲကစိတ်က ထက်သန်နေမိကာမှ ခုတော့ စိတ်လျော့ရမလိုဖြစ်နေသည် ခေါ်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးလား ပိုပေးပါ့မယ်လို့တောင်းဆိုကြည့်လိုက်သည် မရနိုင်ကြောင်းသာဖြေသည် တယောက်တလေ ရပြီးရော ဗျာ ငယ်ငယ်ကြီးကြီး ရတယ် တစ်သောင်းခွဲ တညလုံး ဆိုတော့ ခုညသာရပလေ့စေ ငါးသောင်းပေးမယ် ဟုစိတ်ကပါတိုလာပြီး စားပွဲပေါ်ငါးသောင်းချပေးလိုက်သည် အန်တီကြိုးစားပေးပါ့မယ် သားအခန်းပြန်နားနေလိုက်လေ အဆင်ပြေတာနဲ့ လာပြောမယ် လို့ဆိုသည် ပြီးတော့အပေါ်တက်လာခဲ့ကာ အဝတ်အစားတွေချွတ်ပြီး ရေချိုးပြစ်လိုက်သည် ရေသုတ်ပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီလေးဝတ်ကာ အိတမထဲက လက်တော့ကို ထုတ်လိုက်သည် အင်တာနက်အတွက်လေယာဉ်ဆင်းထဲကကြိုဟယိထားမိလို့တော်သေးသည် လိုင်းကမကောင်းပေမဲ့သည်းခံပြီးသုံးလိုက်သည် စော်ကရမရ က မသေချာ အန်တီကြီးနှစ်ယောက်ကိုမြင်ပြီး စိတ်ကညနေထဲကလာနေတာဖြစ်သည် အဲ့လိုအန်တီကြီးများလိုးလိုက်ရလို့ကတော့လား ဟုတွေးပြီး ဂွင်းထုနေမိသည်
အောက်ထပ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ၂ ယောက်လဲ ဒီကောင်လေးလူကဖြင့်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ် မိန်းမလုပ်ဖို့ဒီလောက်စိတ်ပါတာ မလွယ်ပါလား အသက်က ၂၁ မပြည့်သေးဘူး ရီရီ နင့်သားနဲ့ရွယ်တူလောက်ပဲရှိမယ်နော် ဟု ပြောသည် ယောက်င်္ကျားလေးတွေလဲ ဒါလုပ်ဖို့ပဲတွေးနေကြလားမသိဘူး အသက်ကဖြင့်ငယ်ငယ်နဲ့ လူကြီးစိတ်ကထနေပြီ ဟု ရီရီ ကပြောတော့ အောင်မယ် မိရီမ ညည်းရွာမှာ ကိုဖိုးမောင် ညည်းကို လိုးတုန်းက ၁၆ နှစ်တောင်ညည်းမပြည့်သေးဘူးမလား ကိုယ့်ဖသာကြရွတာမေ့နေတယ်လား ဟုပြောပစ်လိုက်သည် ဒါက ဟိုကစလုပ်တာလေ ငါကဘုမသိဘမသိလေ ဟုဆိုတော့ ဟုတ်ပါတယ် မသိလို့သာပေါ့ ဟိုက နေ့ ခင်းတခေါက် ညတခေါက် စိတ်ကြိုက်လိုးနေတာ တချက်မညင်းဘူး ညည်း ဒီက ညည်းလင်နဲ့ရတာကံကောင်းတယ် ရွာမှာသာဆို ညည်းသားကို အဖေဘယ်သူတော်ရမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူး ဟုပြောသည် နင်ကလဲ လာကပ်သမျှ အကုန်အလုပ်ခံတာအံသြတယ် နင်မှတ်မိပါ့မလားအခုဆို ခုလင်မရခင်အထိ ညည်းလီးဘယ်နှစ်ချောင်းတောင့်အလိုးခံဖူးလဲဆိုတာ ဟုမေးလာပြန်သည် အမလေးဟယ် အဲ့လောက်လဲမဟုတ်ပါဘူး ရှိလှ ငါးယောက် ခြောက်ယောက်ပါပဲ ငါ့များ ဖာသည်မကျနေတာပဲ ညည်းပြောပုံက ဟုပြန်ပြောလိုက်သည် ဒါလောက်များပေမဲ့ ညည်းကိုယ်လုံးက ခုထိ မပျက်တာတော့အံသြတယ် ညည်းဖိုးထောင်နဲ့ လဲဖြစ်ဖူးတယ်မလား ဟိုဘက်ရွာက ပဲသူကြီး လေ ဟမေးပြန်သည် ဘာဖြစ်လို့လဲ လို့မေးတော့ သူကို သူတို့ရွာမှာ အချင်းချင်းပြောတာမျိုးကြားဖူးလို့ အဲ့တုန်းက ဟုတ်လားလို့သိချင်ပေမဲ့ ဘယ်သူမှမမေးရဲလို့ ခုထိအောင့်ထားရတုန်းဟုပြောရင်းရယ်လေသည် ဖိုးထောင်ကိုမရှောင်ရင် အပေါက်ချောင်မယ်နော် တဲ့ ဟုတ်လားအဲ့ဒါသိချင်နေတာ ဟုဆိုသည် အလကား လေထွားတာ ဟုပြောတော့ အယ် အဲ့လိုလား တချို့တွေက ဖိုးထောင်လီးကို လှော်တက်လုံးနဲ့ တူတူပဲဆို ပြောကြတယ် ဟုတ်လားဟုမေးပြန်သည် မဟုတ်ပါဘူးဟာ သူလီးကကြီးတယ် တခြားကောင်တွေထက် ဒါပေမဲ့ အရှည်က ပုံမှန်လောက်ပါပဲ ခက်တာက ဒီကောင်က မလိုးနိုင်ဘူး တခါဆို သွားပြီ ဟုပြောပြလိုက်သည် နင်က ငါ့လိုမှ လူမစုံတော့ လီးဘယ်စုံမလဲ ညာ်းလင်ဟာကလဲ ဖိုးထောသ်ရဲ့ တဝက်လောက်ပဲရှိတယ် ညည်းအိမ်က အထွန်းလီးက ခညည်းလင်ထက်သာတ်မလား ဟုပြောတော့ အောင်မယ် ငါကဘယ်လိုသိမလဲ ဟု ရန်ပြန်တွေ့သည် မသိဘူးမထင်နဲ့ ညည်းအမေတွေက မောင်နှမတွေလိုပါဆိုပြီး ထားထားမှတော့ ညည်းကို မမ မမ နဲ့ အိမ်ပေါ်မှာတင်လိုးသွားရော ငါအကုန်သိပါ့ ဟုပြောချလိုက်သည် ဟယ် နင်ဘယ်လိုသိလဲ ဟု အံသြသလိုမေးသည် ငါကိုယ်တိုင်မြင်တာ နင်တို့နှစ်ယောက် လိုးနေတာကို ကဲရှင်းပြီလားဟု ပြောပြလိုက်သည် ညင်းခုန်နေတာနဲ့ ည၁ နာရီကျော်သွားသည် ကဲ ငါပြန်တော့မယ် ဒီပိုက်ဆံ အဲ့ကောင်လေးသာ ညည်းတက်တဲ့အခါ ပြန်ပေးထားလိုက် ဒါမှမဟုတ် အဲ့ကောင်လေးနဲ့ သွားအိပ်လိုက် နင် ၂ လုံးအကြွေးတွေများနေပြီမလား ဟုစသည် သား လေးပေါ့ ကောင်လေးဒီညသနားပါတယ် မနက်ဖြန်တော့ အဆင်ပြေအောင်ရှာပေးလိုက်မယ်ီည အဲ့တခန်းပဲဆိုပိတ်ထားလိုက်တော့ ငါလဲ မနက်နောက်ကျမယ် ကဲပြန်ပြီဆိုပြီးထွက်သွားသည် တခါးတွေပိတ်ပြီးတက်ခဲ့လိုက်သည် ကောင်လေးအခန်းဝင်မယ်လုပ်ပြီး တခါးဟနေတာနဲ့ အသာချောင်းကြည့်လိုက်မိသည် လင်တော့ဖွင့်ပြီး အောကားကြည့်နေပုံရသည် လက်တဖက်လှုပ်နေတော့ဂွင်းထုနေတာဖြစ်မည် ကျောပေးထားလို့မမြင်ရ မဝင်တော့ပဲ အခန်းအရင်သွားပြီး အဝတ်အစားလဲ သွားတိုက်စသဖြင့် လုက်လိုက်သည် ပြီးမှ ပိုက်ဆံယူပြီး ပြန်ထွက်ခါ ကောင်လေးအခန်းဝအရောက် တခါးခေါက်ရင်းတွန်းမိကာပွင့်သွားသည် ကောင်လေးလှည့်ကြည့်ရင်း ကျမကိုမြင်တော့ အဆင်ပြေလား အန်တီလို့မေးသည် ထိုင်ရာကအထ မူးနေတာနဲ့ ဖန်ခွက်ကတိုက်မိပြီးကျကွဲသွားပြန်သည် မပြေဘူးသားလို့ ပြောတုန်း ဖက်ခွက်ကွဲတွေစင်ကုန်သည် ကောင်လေးထလာမှ သတိထားမိတာက သူ့ဘောင်းဘီထဲက ရှေ့မှာ ကန့်လန့်ဖြတ်အမြောင်းကြီးဖြစ်သည် သား ထိုင်နေ ဒေါ်လေးရှင်းမယ်ပြောပြီး ရှင်းပေးလိုက်သည် ကြမ်းကို ချောက်အောင်တိုက်ပေးရင်း အမှတ်တမဲ့မော့ကြည့်တော့ ကျမရင်ဘက်ကြားက နို့လုံးကြီးကိုငေးနေတာမြင်လိုက်ရသည်
မသိသလိုခေါင်းပြန်ငုံလိုက်မှ မျက်လုံးက ခုနကအမြောင်းထနေရာသို့ကြည့်လိုက်မိသည် ဆွဲသားအပျော့ဆိုတော့ အတွင်းကပုံအတိုင်းမြင်နေရတာဖြဖစ်သည် သိမ်းဆည်းပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ အန်တီ အဆင်ပြေလား ဟုတန်းမေးသည် မပြေဘူးလို့ သားကိုလာပြောရင်းပိုက်ဆံလာပြန်ပေးတာ ဟုပြောရင်း လီးနေရာကိုလှမ်းကြည့်မိပြန်သည် ကောင်လေးကလူကောင်သေးပေမဲ့ သူ့ဟာကသေးမဲ့ပုံတော့မဟုတ် လီးကြီးတာ အလိုးခံဖူးပေမဲ့ အဲ့ထက်ကြီးတာမျိုး ဆိုတဲ့မျော်လင့်တဲ့စိတ် မိန်းမတိုင်းမှာရှိရလောက်တယ်လို့ စိတ်ထဲတွေးမိလိုက်သည် လီးကို မြင်မိတာနဲ့ ငယ်ရွယ်သွားသလို စိတ်ပါနေတက်တုန်းဖြစ်ပေမဲ့ လင်မရှိတ့နောက်ပိုင်း အလိုးခံချင်ပေမဲ့ သား နဲ့ သမီးကြောင့် ဆန္ဒမပြည့်ခဲ့ အလိုးမခံရတာထားလို့ လီးကိုမမြင်ရမှမြင်တွေ့ချင်စိတ်ကထပ်ပိုလာပြန်သေးသည်
တရက် သားဖြစ်သူဂွင်းထုနေတုန်း အခန်းထဲ ဝင်ရင်း တဲ့တဲ့တိုးမိသွားသည် မိမိက ကလေးဟုထင်ထားပေမဲ့ သူတို့က လိုးဖို့ စိတ်ပါတက်နေတက်ကြပီ မြင်မင်တာနဲ့ အလိုးခံချင်စိတ်တဖွားဖွားဖြစ်မိသွားသလိုသားလေးကလဲ ဘာလုပ်ရမသိဖြစ်နေ မိမိက သားရဲ့ လီးကိုငေးနေမိသည်
အမလေး ကြည့်စမ်း မေ့မေ့ သား ဟာ ကြီးက နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး ဒစ်ဖူးကရော အမလေး သားဟာက အရွယ်နဲ့မလိုက်
မမြင်တာကြာတော့ လီးကို သာမျက်လုံးကရောက်နေမိသည် သားထံမှ မေမေ လို့ခေါ်သံကြားမှ သား မင်း ဒါမျိုးတက်နေပြီပေါ့ ဟုမေးလိုက်သည် ပြန်မဖြေပဲ အံကြိတ်ပြီး စိတ်တင်းထားသလိုဖြစ်နေသည် မိမိသိလိုက်သည် သားတော်မောင်ပြီးချင်နေတုန်း ဆက်မလုပ်ပဲ vပြီးခါနီးကို ရပ်လိုက်သလိုဖြစ်ပြီး လရည်မထွက်အောင်ထိန်ရလို့ဆိုတာသိသည် လီးကဆက်မထုပဲ လက်လွှ်လိုက်တာနဲ့ လရည်ဖြူပျစ်ပျစ်တချို့ လီးထိပ်ကနေ အလိုလိုကျလာသည်
တခါတခါ ကော့လိုက်ရင်း တဆက်ဆက်တုန်နေရင်း လရည်တချို့စီးကျလာပြန်သည် သားမျက်နှာကိုမြင်မှ စာနာစိတ်ဖြစ်မိသည် ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးတာအကြိမ်နည်း ဘာမှမပြောတော့ပဲ နေလိုက်သည် လီးတံက မွေလိုတရမ်းရမ်းဆွဲသလို တွဲလောင်းခိုရင်းငိုက်လာသည် သားရဲ့ လီး ကသူ့အဖေဟာလောက်ရှိနေပြီ နဲနဲတော့ တိုလောက်တာကလွဲလို့ အလုံးက တူတူလောက်ဖြစ်မည် အမြဲနေ့တိုင်းလုပ်တာလား သား ဟုမေးတော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြသည် တနေ့ဘယ်နှစ်ခါတောင်လုပ်နေလဲ ဆိုတော ၃ ခါ လောက်လို့ဖြေတာ ကြားမှ သား အဲ့လောက် မလုပ်နဲ့လေ သားကငယ်တော့ အားကုန်တယ် တစ်နေ့တခါပဲ လုပ် ပိုမလုပ်ရဘူးကြားလားဟု မှာထားရသည် အဲ့လောက်လုပ်တာ အရေခွံတွေမစုတ်ကုန်ဘူးလား လို့ပြောရင်း စိတ်ထဲကကိုင်လိုစိတ်ဖြစ်လာပြီး လက်တဖက်က လီးကိုလှမ်းကိုင်မိလိုက်သည်လက်ကကိုင်လက်စနဲ့ အသာကိုင်ကြည့်ရင်း သားကို ဂွင်းထုသလိုလုပ်ပေးရင်းမေးလိုက်သည် ဘာလို့ပြန်မာလာပြန်တာလဲ မေမေ ကိုင်ထားလို့လား ဟုဆုပ်ထားတဲ့လက်ထဲကလီးက ချက်ချင်းဆိုသလိုပြန်တင်းမာပြီး ခုနကထက်ပင် ကောက့်ထောင်ထအာင်မာတောင်ထလာတာသတိထားမိသည် ဒစ်ဖူးကညိုပြီးလုံးနေသည် လုပ်ပြီးရင်ရေသေချာဆေးကြားလား ဟုထပ်ပြောရင်း လီးကိုငုံကြည့်လိုက်သည်
ဝင်လာမိသည့် အတွေးစကို ဖြတ်ခါကြမ်းကိုသန့်ရှင်းရေးဆက်လုပ်နေလိုက်သည်
ဒီလိုအဖေ့ရဲ့ နောက်မိန်းမ ဇာတ်လမ်းမျိုးကြည့်ဖြစ်တော့ ရွှေဘိုနယ်ဘက်ကနေ ရွာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး
ဒီနိုင်ငံရောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျလို့ တတိယနိုင်ငံထွက်ဖို့စောင့်နေတဲ့ မိသားစုတခုနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ရတာ
ပြန်အမှတ်ရမိတယ် သူတို့လင်မယား ဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတာ ဆယ်နှစ်ကျော် ၁၂ နှစ်နီးပါး ရှိနေပါပြီ ဒီမှာညားပြီး၂ နှစ်လေ့ာက်မှာအဲ့ဒီအန်တီက မြန်မာပြည်ပြန် ခလးပြန်မွေးချိန် သူတို့ တတိယနိုင်ငံထွက်ဖို့ခေါ်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတော့ ယောက်င်္ကျားကိုသွားခိုင်းလိုက်ရပြီးနောက်မှ သူတို့သားအမိ လိုက်ဖို့စဉ်လိုက်ရသလိုဖြစ်ရင်းနဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်တာ သိသွားတဲ့အတွက် အခုလောက်ထိမထွက်ရသေးပဲ ကြာနေတာဖြစ်ပါတယ် အညာဘက်က ရိုးအအနဲ့ စကားပြောမတက်တာကြောင့်လြုဲဖစ်မယ်ထင်ပါတယ် ဟိုနိုင်ငံက လင်ဖြစ်သူက သားနဲ့ မယားကို လတိုင်းထောက်ပံပေးထားတော့ မပူရဘူးလို့တော့ဆိုရပါမယ် နေတာက သူ့နဲ့ အမျိုးတော်စပ်သလို နီးသလို ဝေးသလိုရှိတယ်လို့ပြောဖူးတဲ့ တစ်ရွာထဲက ညီမ တော်တယ်ဆိုသူ နဲ့ နေပါတယ် သူ့ညီမဆိုသူ က မြန်မာတရုပ် တစ်ယောက်နဲ့ညားပြီး အဲ့လင်မယားက မြန်မာစားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ကာစီးပွားလုပ်ကိုင်ရှာစားနေသူတွေလဲဖြစ်ကြောင့်
ငွေကြေးပိုင်း ပြေလည်ကြသူတွေလို့ဆိုရပါမယ် ကျတော်နဲ့ စခင်မင်ဖြစ်တာက ကျတ်ာနေတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ ဟိုကိုရွှေတရုပ်က ဆိုင်ဖွင့်ဖို့လုပ်ရင်း အခန်းရှာ ဘာညာတက်သလောက်ကူညီပေးရင်း ရင်းနှီးသွားတာပါ အဲ့လိုနဲ့ အဲ့တရုပ်လင်မယားနဲ့အတူ ပါပါလာတက်တဲ့ အဲ့အန်တီနဲ့ပါ စခင်မင်ပြီး သိခဲ့ဖူးရတာပါ လိုအပ်တာ ပြင်ဆင်တာနဲ့ တစ်ပတ်ကျော်လောက်ကြာမှ ဆိုင်ကိစ္စ ပြီးပြတ်ပါတယ် ဆိုင်နဲ့ ကျတော်အခန်းနဲ့က အပေါ်ထပ် အောက်ထပ်ပါ အားဘုံးပြီးစီးလဲသွားရော ကိုရွှေတရုပ်စီစဉ်ထားတဲ့ ဆိုင်လုပ်သားကိုယ်တော်က စာအုပ်သင်တမ်းတိုးမရ ဖြစ်ပြီးပြန်သွားလိုက်ရတာပါ
လူရင်းမရှိလို့ကလဲမဖြစ်တော့ လူကြီးအနေသဘောမျိုး ဖြစ်အောင် အဲ့အန်တီကို ဆိုင်ခဏတာဝန်ပေးဖို့ပြောဆိုပြီး ရပ်ကွက်နယ်ခံဖြစ်တဲ့ကျတော်ကိုပါ အတင်းကပ်အကူအညီတောင်းပြန်ပါတယ် ကျတော်အတွက် ခက်ခဲနေတဲ့ စာအုပ်သက်တမ်းတိုးကိစ္စကိုပါ သူပဲတာဝန်ယူတိုးပေးပြီး ၂ လ ၃ လ လောက်သာကူညီပေးဖို့ တောင်းဆိုပြီး လခထက်ပိုတဲ့လစာ ပေးထားပါ့မယ် ကတိခံတာကြောင့် ကူညီပေးဖို့ ဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့
အဲ့ဒီအန်တီက ရိုးအေးသလိုရှိပေမဲ့ သူ့သားချာတိတ်က အတော်လည်ပါတယ် အဖေဖက်အမျိုးကို ဘာသာရေးအရ ပိုခင်တွယ်ပုံရပြီး အမေဖြစ်သူနဲ့ အတူမနေပဲ ဖအေဖက်က အမျိုးဆွေတော်တွေနဲ့သာနေမယ်ဆိုပြီး
ခုဆိုင်မှာ အတူလိုက်မနေပါဘူး ကိုရွှေတရုပ်က ဆိုင် ၂ ခုသွားလာလိုတာ သူကပဲဦးစီးလုပ်ပေးပြီး ဆိုင်ဟောင်းမှာ သာအနေများပါတယ် သားဖြစ်သူအတွက် တရုပ်စာကျောင်းနဲ့ နီးတော့ သူ့သားကို ဒီမှာထားပြီးဆိုင်ဖွင့်ဖို့စိတ်ကူးနဲ့လုပ်တာပါ
ခုတော့လဲ အဆင်ပြေသလို လည်ပတ်နေအောင် သူ့သားကို ဒီဆိုင်မှာ အကူလဲ ရ သဘောနဲ့ ထားပေးတာလဲဖြစ်ပါတယ် သူ့သား မြန်မာတရုပ်ပေါက်စကအစ အတော်လည်ပါတယ် ဒီကတရုပ်ကလေးတွေနဲ့ပြောဆိုပေါင်းနေတာလဲ ပါမယ်ထင်ပါတယ် ဟိုအန်တီပြောပုံအရ သူ့သားနဲ့ရွယ်တူအသက်ပေမဲ့ ဒီတရုပ်ပေါက်စက လူကောင်ထွားပြီး နပ်နပ်ဝကာ အရပ်လဲ မဆိုသလောက် ဒီအန်တီသားထက်ပိုရှည်ပါတယ် အန်တီအညာသူ ကလဲ အစထဲကရွာသူခပ်တောင့်တောင့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး ကလေးမွေး အလုပ်သိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ပဲ ထိုင်စားသလိုသာဖြစ်နေတော့ ကိုယ်လုံးတွေက ဆိုဒ်ကြီးထဲမှာပါတယ် ဒီလိုနဲ့ တလကျော်လာပြီး အန်တီနဲ့ ပိုပြီးရင်းနှီးလာပါတယ် ကျတော်က ဟိုချာတိတ် တွေထက် အသက်ကနဲနဲပိုကြီးပေမဲ့ ဒီကကိုရွေတရုပ်ပေါက်စ ကအခုပိူထွားလာသလိုနဲ့ အရပ်ပါရှည်လာတာသိသာလာပါတယ် အန်တီသားလဲ သိပ်ထွားလာတယ်မထင်ပါဘူး တခါတလေလာတုန်းမြင်ဖူးကြောင့်ပါ အဲ့သလိုနဲ့ တလကျော်လာပြီးနောက်ပိုင်း အန်တီက တခုအကူအညီတောင်းပါတယ် သူ့ယောက်င်္ကျားနဲ့ အင်တာနက်ကတဆင့်
စကားပြောဖို့အတွက်ပါ အန်တီမှာ လက်တော့ရှိတယ်မလားဆိုတော့ အငယ်ကောင်က ညပိုင်းသူပဲကလိချင်နေတာမလို့လေ
ဟိုဖက်ကအလုပ်အားတာကလဲ ဒီက ည ၁ နာရီ ၂ ရီ လောက်မှ ဖြစ်နေတော့ အဲ့ဒါ ပြောဖို့လဲခက်လို့ သား ကို အဆင်ပြေမလားမေးကြည့်တာပါ ပြေပါတယ် အန်တီ ရပါတယ် ကြိုက်တဲ့အချိန် သာပြောပါ ဒါမှမဟုတ် အန်တီ ကျတော့်လက်တော့ အခန်းယူသွားလေ ရပါတယ် ဟုပင်ဆိုလိုက်သည်
ဒါမှမဟုတ် ပြောချိန်မှ လာပြောလဲရတယ် တရုပ်ကြီးက အဲ့ချိန်ထိမအိပ်သေးတော့ အန်တီပြောဆိုတာမလွတ်လပ်လို့ ဒီမှာပြောမယ်ဆိုလဲပြော ကျတော် အပြင်ထွက်အိပ်နေလိုက်မယ် အားမနာတမ်းသာပြော ဟုဆိုကာ စားပွဲခုံကိုလက်ညွန်ပါပြပေးလိုက်သလိုလုပ်ရင်း
စနောက်လိုက်သည် တခုသားကိုပြောဖို့မေ့နေသေးတယ် တရုပ်ကြီးက ၁၁ခွဲမှပြန်လာာတာဆိုတော့ သူပြန်မရောက်ခင် အန်တီ သားအခန်းလာကူးနေလိုက်မယ် သူမေးရင် အန်တီအမျိုးအိမ်သွားအိပ်တယ်လို့သာပြောပေး ရမလားဟုမေးသည်
မနက်ဖြန် ဟိုလင်မယားနဲ့တဆိုင်လုံး ကမ်းခြေသွားလညကမှာမလို့ ဆိုင်ပိတ်ခိုင်းတယ်ဒီကိုလဲ အန်တီက အဲ့လိုတွေစိတ်မပါလို့ မလိုက်ဘူးပြောလိုက်တယ် သူ့သားကို ကားဒီဝင်ခေါ်မယ် အိပ်ယာသာနိုးပြီးထည့်ပေးလိုက်ပြောတယ် သား ရော လိုက်ချင် လိုက်သွားပေါ့ ဆိုကာမေးတော့ မလိုက်ချင်ပါဘူး အန်တီ ရာခဏခဏရောက်ဖူးနေကျ
ဒါဆိုပြီးမှဖုန်းဆက်လိုက်လေ ခုဆိုင်လဲပိတ်ပြီပဲ ထမင်းရော စားကြီးရဲ့လား ဟုမေးသည်
စားပြီးပြီဆိုတော့ ကဲဒါဆို အန်တီစာရင်းနဲနဲလုပ်ဖို့ကျန်တယ်
ပြီးမှရေချိုးတော့မယ် ခုမှ ၁၀ခွဲဆိုတော့ အချိန်ွှသေးတယ် အငယ်ကောင်မရောက်ခင်အမြန်လုက်ထားလိုက်မယ်
သူလဲ လိုအပ်တဲ့စာရင်း လိုက်မှတ်နေတာနဲ့ ၁၁ ထိုးလောက်ဖြစ်သွားသည် တချိန်ထဲ တခါးခေါင်းလောင်းသံမြည်လို့ ကင်မရာကိုကြည့်တော့ တရုပ်ကြီး ဖြစ်နေသည်
အန်တီ အင်ာကောင်စောပြန်လာတယ် ဟုအသာပြောလိုက်သည် ခက်တော့တာပဲ ခုမှ ၁၁ နာရီမလား ဟုပြန်မေးသည်
ဟုတ်ဆိုတော့ ဒါဆိုလဲမတက်နိုင်တော့ဘူး သား အခန်းဖွင့်ထားလားဆိုပြီးမေးသည် ဟုတ် လိုဖြေလိုက်တော့ အန်တီ ခူနမှာသလိုသာပြောလိုက် အခန်းထဲကလော့လျထားမယ် သား သော့ရှိတယ် မလားဆိုပြီးမေးသည် ရှိတယ် ဒါဆို သားဖာသာ သော့ဖွင့်ဝင်ခဲ့ ဟုတ်ပြီလားဆိုကာ အခန်းထဲဆို့ ခက်သွက်သွက်
ဝင်သွားသည် တရုပ်ကြီးလဲ ကမ်းခြေသွာမှာပြောတော့ အဖေကခုနဖုန်းဆက်သေးကြောင်း
မနက်အချိန်အတိအကျမသိလို့ ဆိုင်သော့တခုကို သူ့သားကိုပေးထားပြီး စိတ်ချလက်ချအိပ်နေဖို့သာ မှာသည် နားရတုန်း စိတ်ပါအပြီးနာစလိုက် မင်းအန်တီကိုလဲ ပြောထား
ဒါဆိုလဲ ဆိုင်ပိတ်နားပြောတယ် ဆက်တိုက်ပင်ပန်းနေပြီတဲ့ ဝလာတဲ့သူ့သားတောင် ပြန်ပိန်သွားတာကြည့်ရင် ကျတော်တို့
ပင်ပန်းတာ သူ သိပါတယ်လို့ အခန်းထဲရောက်တော့ အန်တီကိုပြန်ပြောပြဖြစ်သည်
အမလေး သူ့သားပိန်သွားတာ အလုပ်ပင်ပန်းလို့ ဆိုပြီးထင်နေတယ်ပေါ့လေ
သူတို့သားကအလုပ်အတော်ကူဖေါ်ရတာကျနေတာပဲ ဟုဆိုသည် ကျတော်က သူလဲ အားကစားလုပ်တော့ ကိုယ်ရေစစ်တာလဲနေမှာပါ တရုပ်စာကျောင်းပါတက်နေတော့
အိပ်ချိန်လဲနည်းတာပါမှာပေါ့ ဟု အလိုက်သင့်ပြန်ပြောတော့ အန်တီမှ ဟွန်း မပြောချင်ဘူး ညည မအိပ်ပဲ ကွန်ပျုတာရှေ့ထိုင်ပြီး လက်နဲ့လုပ်တဲ့ အားကစားပဲ လုပ်နေတာ
ကိုယ်ကတော့ သား နဲ့ အရွယ်တူမလို့ ကလေးလိုမှတ်တာ
သူက လူကြီးအားကစား လုပ်နေလို့ပိန်တာ ဒါပဲစိတ်ပါနေသလားထင်ရတယ် တညတညဘယ်နှစ်ခါတောင်လုပ်နေလဲမှမသိတာ
ပိန်တာတောင်နဲသေးတယ် ဟု ခပ်ဆပ်ဆပ်ပြန်ပြောသည်
ကျတော်တို့နေရပ်က မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘက်က မြို့နယ်အဆင့် သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ ရွာကြီးတခုလို့ပြောရင်ပိုကိုက်ညီမယ်ထင်ပါတယ် အခုမှ လမ်းပန်းအဆက်အသွယ်တိုးတက်လာလို့မြို့နယ်ရုံးဖွင့်လို့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးသာရှိပါသေးတယ် အမေက ငါးပိ ငါးခြောက် တနိုင်လုပ်ပြီး မြို့ပေါ်တင်ပို့ရောင်းတာမျိုး ပြုလုပ်ပြီး ကျတော်တို့မိသားစုတာဝန်ကို ဦးဆောင်နေသူပါ အဖေ ကဆုံးတာ ၃ နှစ်ကျော်သာရှိပါသေးတယ် အမေက အရင်ကဝန်ထန်းဖြစ်ပြီး အဖေဆုံးတော့ ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြပြီးအနားယူခဲ့သူပါ စားဝတ်နေရေး မကျပ်တည်းပေမဲ့ ကျတော်လဲ ၁၀ တန်းဖြေပြီးတာနဲ့ ကျောင်းတက်ဖို့စိတ်မကူးတော့ပဲ အမေ့အတွက် တခြားပင်လယ်ဘက်ရွာတွေအထိဆင်း ငါးရှာပေးတဲ့ တာဝန်အပြင် ငါးခြောက် ဘာညာစသည်တို့ကို တကယ့်မြို့ပေါ်ရောက်တဲ့အထိပို့ပေးလိုက်နဲ့ ကုန်သည် အလုပ်သမားတပိုင်းလိုဖြစ်နေတော့တာပါ နဂိုအသားကဖြူပေမဲ့ နေ လေ နဲ့ အမြဲနပမ်းလုံးနေရတော့ အသားကအစငါးခြောက်နေလှန်းပြားလို နီစပ်စပ်ပင်ဖြစ်နေပါပြီ ကျတော်ကို အိမ်သားတွေက အသေးလေး ပဲခေါ်ကြပါတယ် အဖေ အမေ အမ ဖြစ်သူတွေ လူလုံးထွားသလောက်ကျတော်က အနဲငယ်ညက်တယ်ဆိုရပါမယ် အိမ်အနေနဲ့ညက်ပေမဲ့ အပြင်မှာဆို ရွယ်တူချင်း တန်းတူလောက်သာရှိတာပါ အိမ်က လူကြီးတွေက အငယ်ဘဲဖြစ် လူကလဲ တခြားသူတွေလိုမဟုတ်လို့သာ အသေးလေး ခေါ်နေတာဖြစ်သည် အိမ်မှာက လူကပုံသေနေတဲ့သူမရှိ အမေ က သူ့ငါးခြောက်လှမ်းရာ အိမ်နောက်ခြမ်းက ငါးခြောက်လှောင်တဲ့ တဲမှာ အနေများ သလို ကျတော်က ဟိုဒီသွားနေသူ အမ ဖြစ်သူကလဲ သူလင်ရဲ့ ဆားကွင်း နဲ့ ကူးသန်းနေတာမျိုး ဆိုတော့ တခါတလေ တလနေမှ တခါလောက်မိသားစုစုံသလိုဖြစ်တက်သေးသည်
တစ်ရက်အိမ်မှာ အမေ နဲ့စကားပြောရင်း အမေမှ ငါ့သား ကိုပြောဖို့မေ့နေတယ် ခုလာမယ့် စနေနေ့ အမေ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဒီကိုရောက်လာလိမ့်မယ် အမေ နဲ့ ဝန်ထမ်းဘဝတုန်းက ခင်မင်ဖူး အတူလုက်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ အမေ့ စူငယ်ချင်းဟောင်းဆိုပါတော့ အခုသူက ဒီကရုံးကို ဒုလက်ထောက်ရာထူးနဲ့လာတာဝန်ယူရမယ် အဲ့ဒါ သူက အမေ ရှိမှန်းသိတော့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ လာတဲ့အဖဲါ့တွေမှာ မိန်းမ ကသူတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေလို့ဆိုပြီး အမေ တို့နဲ့လဲ အတူလာနေဖို့ အမေ့ကိုခွင့်တောသ်းတယ်ဆိုကါတော့
တစ်ပတ် တခါ ၂ ပတ်တခါပြန်မှာပေါ့ သူ့မိသားစုကရန်ကုန်မှာ သူလဲရာထူးအတွက်မဖြစ်မနေသာလာရတာ ၆ လလောက်ဟန်ပြနေပြီး ပြန်ပြောင်းဖို့စီစဉ်ပြီးသားဆိုပဲ အဲ့ဒါ နေဖို့ကိုတော့ သားအမက သူတို့လင်မယားခန်းပေးတယ် သူတို့ က ဆားကွင်းမှာနေတာများတယ်ဆိုပြီး အိပ်ပေါ်မှာနေရာပေးမှလဲသင့်မယ် အမေထင်လို့ သားအခန်းနဲနဲကျဉ်းတယ် ပြီးတော့ သူအတွက် အကူကလေးတစ်ယောက်ပါမယ်ပြောသေးတယ် အဲ့ဒါတော့လာမှ အမေ စဉ်ပေးလိုက်မယ် အဲ့ဒါသားကို အသိပေးတာ ဟုပြောပြီး ကဲ ငါ့သား အမေနောက်တဲပြန်ကူးလိုက်အုံးမယ် ဟုတ်ပြီလား ဆိူကာ ထထွက်သွားပြန်သည် အမေလဲ ဒးနာတော့ လှေကားဆို လုံးဝမတက်အောင်ရှောင်နေရတယ်
စိတ်ထဲမှာတော့ နားညီးမယ့်အဖွားကြီးဧည်မှအိမ်လာတည်းရသလားဟု တွေးပြီး အိမ်ပေါ်တက်ရင်း စိတ်ညစ်သွားသလိုဖြစ်ပြီးတွေးမိလိုက်သေးသည် အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ အမတို့ လင်မယားက လိုအပ်တာလောက်ယူပြီး ခညနေ ပဲဆားကွင်းကိုထွက်သွားကြသည် အခန်းတော့ အတော်သန့်ရှင်းပေးခဲ့တယ် ပမေပြောတယ် အိပ်ယာ ခေါင်းအုံးအကုန်ပါလာမယ်တဲ့ ကဲ နောက်ကျနေပြီ အမတို့ သွားတော့မယ် အခန်းထဲကဆွဲထုတ်ရင်း အိမ်ရှေ့ခန်းက ပြန်ရှုပ်ကုန်တယ် ငါမြောင့် ကြည့်သာ လုက်လိုက်တော့ ဟုတ်ပြီလား ဟုပြောရင်းဆင်းသွားကြသည် သူလဲ ဘာမှရှင်းမနေတော့ပဲ တန်းအိပ်ပြစ်လိုက်သည် မနက်စောစော ငါးသွားယူဖို့ချိန်းထားသေးသည်
မနက်ဖြန်စနေဆိုတော့ အမေ့ အသိကရောက်လာအုံးမယ်ထင်သည် သူလဲပင်လယ်မှရွာကို မိုးချုပ်မှသာ ပြန်ရောက်သည် အမေ့တဲဝင်ကာလိုအပ်တာကူလုက်ပေးပြီး ရေချိုးကာ ထမင်းစားလိုက်သည် နာရီကြည့်တော့ ည ၁ နာရီကျော်နေပြီ ပိမ်ဘေးမှာ ကားတစ်စီးရပ်ထားပုံအရ အမေ့အသိရောက်နပြီဟုထင်မိသည် ထမင်းစားတုန်း အမေကလာပြီး သား အမေ့ ပြောတဲ့ ရုံးကဆိုတာ ရောက်ကြီနော်သား ခုည အပြန်ကားမောင်းလို့အဆင်မပြေလို့ သူ့ယောက်င်္ကျားပါ အိပ်ခိုင်းထားတယ် မနက် စောစောမှ ထပြန်မယ် အလုက်မအားဘူးတဲု့သူ့လင်ကလဲ ပြီးတော့ အကူကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါတယ် လျော်ဖွတ် ချက်ပြုတ်ပေးဖို့ တဲ့ အမေ အိမ်အောက်က မင်းအဖေ အခန်းဘေးမှာ နောက်ရက် အဆင်ပြေအောင်ကာရံပေးမယ်ပြောထားလိုက်တယ် သား အဖေအခန်းကိုတော့ အမေ တခြားသူမထားချင်ဘူးဟုဆိုရင်း တဆက်ထဲ နောက်သား အားမှ ဒီက ငလုံးတို့ညာခေါ်ပြီး ကာရံပေးလိုက်ပါသားရယ်ပြီးတော့ သားအဖေအခန်းတံခါးကိုလဲ တခုခုနဲ့ ရှာပြီး အဆင်ပြေအောင်ပြန်လုပ်ထားပေးအုံး အရင်က မင်းအမယောက်က်ျားက အဲ့အခန်းမှအဲ့အခန်း နေ့ခင်းနေ့လည်နေရအရမ်းကောင်းတယ်ပြောတယ် ဟုတ်တယ် အမေရ သား နဲ့ သူနဲ့ အမြဲ လုချောင်းနေရသလိုတောင်ဖြစ်တယ် နေ့ခသ်းဆို အိပ်လို့ အဆင်ပြေတယ်
ရေတွင်းနဲ့နီးတော့ မြေကလဲ အမြဲ အအေးဓါတ်ရှိတယ် စားသောက်ရင်းပြောနေတာနဲ့ ၂ နာရီလောက်ပင်ဖြစ်သွားသည် ကဲနားလိုက်အုံးသားလဲ မနက်မှ အမေ့သားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ် သူလင်က စောစောပြန်မယ်ပြောတယ် ညနေက မောင်လေုံးပြောတဲ့ ဦးတည်ဘွား ကားမောင်းလာတယ် ဆိုတာ သူတို့ကိဆိုတာုပြောတာလားဟုမေးတော့ အမေရယ်ရင်း ငလုံး ကပြောလဲပြောတက်တယ် ပြောချင်စရာပဲ ကျောက်ကုန်သယ်မလို့သာ ပေါ့ ပြောရင်းအမေရယ်လေသည် မိနွယ်ကတော့ လူကလဲ ဝန်ထမ်းဂုဏ်ရှိ ပိုက်ဆံကပါ လိုတာရသလိုအဆသ်ပြေ ရ်ုကစထဲက မင်းကြီးကြိုက်အပုံစံ အသက်နဲ့လူနဲ့တောင်မထင်ရဘူးလို့အမေကပြောသည် အဖွားအိုဖြစ်နေပြီလား လို့အမေ့ကိုမေးတော့ အသက်က အမေနဲ့ အတူတူပဲ အမေက ၃ လပိုကြီးတယ် ပြီးတော့ သူ့သားက သားနဲ့တူပြန်ရော ဒါပေမဲ့ သားက ၃ လငယ်တယ် ညနေကမှစကားစပ်လို့ပြောမိတာ
၁၀တန်းငမတက်သေးဘူးတဲ့ ဘော်ဒါပို့ထားတယ်ပြောတယ် ပြောရင်းအိပ်ချင်လာတာနဲ့ သမ်းလိုက်ပြီး ပမေက ကဲ သားသွားနားတော့ မနက်ဖြန်လဲ နားအုံး ငါ့သားလဲပင်ပန်းနေပြီ ပရွယ်နဲ့ အလုပ်နဲ့မမျှလုပ်နေရတယ် ဆိုသည်
အိမ်ရှေ့ကမဝင်ပဲ နောက်ဖေးဘင်မှအသာတိတ်တဆိတ်ဝင်ပြီး အရှေ့ခန်းကိုဖြတ်ဝင်လိုက်သည် ရှေ့ခန်းအရောက် ခေါကုတင်လိုဟုတခုပေါ်မှာ ဇာခြင်ထောင်အုက်ထောင်ထားပြီး မိန်းမတစ်ယောက်ပိပ်ပျော်နေတာမြင်ရသည် ကုရင်မလိုလိုဖြစ်ဖို့များမည် တင်းတင်းတုတ်တုတ်နဲ့ ရှိပုံရသည် မှောင်ရိပ်ကြောင်သေချာမမြင်ရ အပေါ်တက်တော့မှ အခန်းနားမှာစုပုံထားတဲ့ နိုင်ငြံခြားဖြစ်အိတ်ကြီးလို ၂ လုံးနဲ့ တခြားလက်ဆွဲအိတ်တလုံး ပလက်စတစ်ဘူးလိုတပုံးထဲမှာ ဘာမှန်းမသိတာတွေပါပုံရသေးသည် လရိပ်ော့ာင့် မီးမလာတာမပူသလို နေလာတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ တခမှ ဖယောင်းတိုင်မထွန်းဖြစ် မီးလာတဲ့အခါတော့ TV လေးဘြာ့ည့်တာသာရှိသည် အခန်းထဲဝင်တော့ ဘေးခန်းက တခုခုနဲ့ မီးထွန်းထားတာဖြစ်မည် အလင်းတချို့ဝင်တာသတိထားမိသည် ပြီးမှ အမတို့ပစည်းရွှေ့ထားလို့ဆိုတာသိလိုက်သည်
တဆက်ထဲ အသံသဲ့သဲ့ကြားတာနဲ့နားစင့်မိတော့ ဘေးခန်းကမှန်းထင်ကာ လူကလဲထပြီး သူသာ သိထားသည့် အပေါက်မှ အသာ ချောင်းလိုက်သည်
Real ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းကင်
ဘာကိုမှ မဝေဖန်လိုပါ သို့ သော်
ကြည့်ဖူး တွေ့ဖူးသမျှ တကယ်အဖြစ်အပျက်တွေထဲမှာ ဒီကောင်လေး အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်လောက်မည်
သူ့အမေ တော့မဟုတ်တန်ရာ တစိမ်းတရံဆိုရအောင်လဲ ဒီကလေးအရွယ်လောက်ကို တော်ရုံ ကိုယ့်သားအရွယ်လေးနဲ့ တကူးတက ဖြစ်မည်မဟုတ်လောက်သေး အတူနေသည့်အထဲမှ ဆွေမကင်းမျိုးမကင်း ပတ်သက်ရာထဲက တစ်ဦးတစ်ယောက်သာဖြစ်နိုင်သည်
ကောင်လေးက စ ရဲလောက်မည်မဟုတ် သူ့အမေအရွယ် ဖြစ်နေတာမလို့
အမေအရွယ် မိန်းမတစ်ယောက်ခေါင်းကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး သား အငယ်ဆုံးလောက်သာရှိလောက့်မည့် ကလေးတစ်ယောက်က သူရဲ့ လီး ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်စုတ်ခိုင်းနေတာလိုက်ပုံများ
တချို့ဇာတ်လမ်းတွေမှာ အမေနဲ့ပက်သက်တာတွေပါပါတယ် ဒါကအခြားပြည်ပဇာတ်လမ်းတွေမှ နောက်ခံယူတာမလို့ပါ ပုံတွေ တချို့တွေဆိုရင် real video ဆိုပြီး အမေ နဲ့ သား လိုးနေတဲ့ အိမ်တွင်းဖြစ်ကိုယ်တိုင်ရိုက်လေးတွေပါ တွေ့ရပါတယ် မြန်မာလူမျိုးအနေနဲ့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတကယ်မရှိပါဘူး မိထွေး နဲ့ ဘာညာဖြစ်တာမျိုးကြားဖူးပါတယ်အမေ နဲ့တော့ မရှိပါဘူး ကျန်တာကတော့ရရင်ကျတော်လဲလုပ်မှာပါ အမေ နဲ့ တော့ -ိုးလောက်အောင်မရိုင်းကြပါဘူး တခြားပြည်ပမှာရှိချင်ရှိမှာ အင်ဒိုနီးရှားမှာ တကယ်ရှိတယ်လို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲပြောပါတယ် မလေးရှားမှာလဲ ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ် အင်ဒိုလူမျိူးတွေနဲ့ နီးစပ်ပါက သူတို့ အပြောအောစာအုပ်တွေ ရုပ်ပြဇတ်လမ်းတွေဌားဖတ်ကြည့်ပါ အမေ နဲ့ သား လိုးတာတွေ အတော်များများတွေ့ရပါတယ်
အနောက်နိုင်ငံတခုကအွန်လိုင်း စစ်တမ်းတစ်ခုမှာ အသက် ၄၀ ကျော် အမျိုးသမီး ၁၀၀၀ နဲ့ ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ် ၁၀၀၀ ကိုစစ်တမ်းယူကြည့်ရာ # အမေ ဖြစ်သူမှ သားဖြစ်သူနဲ့ ဆက်ဆံချင်စိတ်ရှိသူ ၂၃ %
# အမေ ဖြစ်သူမှ သားဖြစ်သူနဲ့ဆက်ဆံဖူးသူ7%
# သားဖြစ်သူမှ အမေ ဖြစ်သူနဲ့ ဆက်ဆံချင်စိတ်ရှိသူ ၁၇ %
# သားဖြစ်သူမှ အမေဖြစ်သူနဲ့ ဆက်ဆံဖူးသူ ၄ %
အဲ့သည့်လို စစ်တမ်းထဲမှ ဆက်ဆံချင်စိတ်ရှိသူ နဲ့ ဆက်ဆံဖူးသူ တို့ကို အွန်လိုင်းမှသာ ဆက်သွယ်ခွင့်တောင်းခံပြီး
ဆက်သွယ်ခွင့်ရရှိသူကိုသာ ထပ်မံမေးမြန်းပြီး သုသေသနအနေနဲ့
မေးမြန်းတာမျိုးသာဖြစ်ပြီး အကူအညီလိုပါက နည်းလမ်းပေး
အတက်နိုင်ဆုံးအစစ်အမှန်ကိုသာ ဦးစားပေးပြီး ရေးသား/ပေးပို့
သူရဲ့ပိုစ့်ကိုသာ အဓိက ဖေါ်ပြသွားပါမည်
Real my m** help me
အဲ့သလိုရေးပြီးတင်ထားတာပါ ဟုတ်မဟုတ် မိမိသဘောသာဖြစ်ပါသည်
ရိုက်ထားပုံတွေအရ တမင်ဇတ်လမ်းဖြစ်အောင်ရိုက်ပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာ လိုက်ရိုက်ထားတာမျိုးဖြစ်ပြီး မိသားစုဓါတ်ပုံတချို့ကိုပါရိုက်ပြထားတာကိုတွေ့ရတော့ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ် မိသားစု အတူခရီးသွားတဲ့ပုံ ခရစ်စမတ်ည မိသားစုပုံ ကျောင်းမှာဆုယူတုန်း သားအမိ၂ ယောက်တွဲပုံ အဲ့လိုတွေပါမြင်ရတော့ မယုံရခက်ကြီးပါ ရေချိုးခန်းနဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ဂွင်းထုပေးနေတဲ့ပုံတွေပါ ဒါပေမဲ့ အမေ အရင်းဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး အဲ့လို photo တွေ video တွေ အများအပြားရှိတာ တွေ့မိပါတယ် ကျွန်တော်နဲ့အွန်လိုင်းမှာ သိတဲ့ အန်တီတစ်ယောက်ကိုပြပြီး မေးဖူးပါတယ် မဖြစ်နိုင်ဖူး လို့ပြောပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ထပမမေးတော့ မင်းအမေ က မင်းကို အဲ့လိုလုပ်ပေးဖူးလို့လား ဆိုပြီး ပြန်မေးတာခံရဖူးပါတယ် ပြီးတော့ မင်းအမေကို မင်းလီးပြဖူးလား ဆိုပြီးမေးပါတယ် Posted by
အမေ ဖြစ်သူ masturbation လုပ်နေတာကို သား
ဖြစ်သူက hidden cam နဲ့ ရိုက်ထားတပါ ကိုယ့် အမေ ကိုကြည့်ပြီး ဂွင်းထုကြမယ့်သူတွေကို သား ဖြစ်သူက အခမဲ့ဝန်ဆောင်ပေးထားတာပါ
သူငယ်ချင်းတို့ရော စမ်းသပ်ချင်သပါ့ဆို ကိုယ့်အိမ်မှာစမ်းကြည့်ကြပေါ့
လိုင်းပေါ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားအုံးပေါ့ အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတုန်းချောင်းဖူးမြင်ဖူးကြလားတော့မသိဘူး
အမေ ကလဲ သားဖြစ်သူကိုမြင်ဖူးချင်မှာပါ
အဒေါ်တွေ အမေတွေကို မသိသလိုဟန်ဆောင်ပြီး
သူငယ်ချင်းအမေ ရဲ့ ပုလွေ
မလေးရှား ဖြစ်ရပ်မှန် Posted by
ဆရာမ ဒေါ်မြင့်ကြည် (သို့) မိထွေး
အန်တီ မေမေ တို့ အထူးသတိပြုဖို့ပါ